ko htike's prosaic collection: October 2007
Posted by ကိုထိုက် at 19:11 14 comments
Posted by ကိုထိုက် at 09:11 26 comments
အောက်က စာစုက ကျွန်တော့် ပို့စ် တစ်ခုမှာ လာရေးသွားတဲ့ comment တစ်ခုပါ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားခဲ့သော ဆူပူအကြမ်းဖက်မှုများကို ဖန်တီးဖို့ အမေရိကန်နိုင်ငံက ဒေါ်လာ ၂၅ သန်းကျော် သုံးစွဲသွားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဆူပူသူတွေကို အစားအသောက်တွေပေးဝေပြီး အပေါစားစည်းရုံးရေးနဲ့ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတာ အများကြီးပါပဲ။ွ
အထက်ပါ comment ကို၊ ကျွန်တော်တို့ ဆွေးနွေးကြည့်ကြရအောင်။ ကျွန်တော်ကတော့ အဆိုပါ စာရေးသူကို ဒီနေရာကနေ ပြောချင်ပါတယ်။ အမေရိကန်က ဒေါ်လာ၂၅ သန်းကို သုံးစွဲ စည်းရုံးတယ်ဆိုတဲ့ ခင်ဗျားရဲ့ အဆိုကို ခိုင်လုံတဲ့ အထောက် အထား သက်သေပြပါ။ သူတို့က ဘယ်လို သုံးတယ် ...၊ ဘယ်လို အပေါစားနည်းနဲ့ လုပ်တယ် ...၊ ဘယ် အစား အသောက်တွေကို ဘယ်နေ့က ဘယ်သူတွေနဲ့ ဘယ်လို ပေးဝေတယ် ဆိုတဲ့ သက်သေလေးနဲ့ ပြောစေချင်ပါတယ်။
ခင်ဗျား ပစ်စလက်ခက် ပြောလိုက်တဲ့ စကားဟာ အမေရိကန်ကို မထိခိုက်ဘဲ၊ ငြိမ်းချမ်းစွား ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်ပြီး အသတ်ခံ၊ အဖမ်းခံရတဲ့ သံဃာတော်တွေ၊ ပြည်သူတွေကို တိုက်ရိုက်စော်ကားရာ ရောက်ပါတယ်။
ခင်ဗျား ပြောလိုက်တဲ့ စကားမှာ .....
(၁) အမေရိကန်က မြှောက်ပေးလို့ လုပ်တယ်ဆိုတာရယ်၊
(၂) ပြည်သူတွေက အပေါစားစည်းရုံးရေးနဲ့ စည်းရုံးလို့ရတယ်ဆိုတာရယ်၊
အဲဒီ အချက် ၂ ချက်နဲ့ ခင်ဗျားဟာ မြန်မာ တစ်နိုင်ငံလုံးက ပြည်သူလူထု တရပ်လုံးကို အသုံးမကျတဲ့ ခပ်တုံးတုံးတွေလို့ ပြောဆိုပြီး စော်ကားလိုက်တာပါပဲ။
ခင်ဗျားအနေနဲ့ ကိုယ့်ဂုဏ်သိက္ခာကို လေးစားပါ။ နအဖပိုင် သတင်းစာတွေက ရေးသလို ပေါက်တတ်ကရ စွပ်စွဲရေးတာတွေ အထောက်အထားမရှိဘဲ ခပ်ပေါပေါ ပြောတာကို ကျွန်တော်တို့က လက်မခံနိုင်ပါဘူး။ ဒီတော့ အထောက် အထားနဲ့ ဒီပို့စ်ရဲ့ အောက်မှာ comment ထဲထပ်ဖြည့်ထားခဲ့စေချင်ပါတယ်။ အခြား ပုဂ္ဂိုလ်များလည်း ဆွေးနွေးချင်တဲ့ ဆန္ဒရှိရင် comment မှာ ပါဝင် ဆွေးနွေးဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
Posted by ကိုထိုက် at 08:36 31 comments
CSW WELCOMES HISTORIC BURMA DEBATE IN HOUSE OF COMMONS
Mr Mitchell also joined other MPs in urging the Government to investigate crimes against humanity in Burma and bringacase to the International Criminal Court.
During the debate, David Burrowes MP and Lord Alton attendedavigil opposite Parliament organised by Burmese exiles. Following the debate, Nigel Evans MP joined CSW’s Advocacy Officer Benedict Rogers and CSW supporters in an overnight vigil in Parliament Square. Mr Evans told the House of Commons during the debate: “The one thing that cannot be extinguished is the spirit of the people, who are fighting for liberty – their lives may be extinguished, but the campaign goes on. The campaign will go on in Burma until the hideous regime is removed.”
Commenting on the debate, Benedict Rogers said: “We warmly welcome this historic and timely debate in the House of Commons. We are delighted to see such passionate support in all political parties in the UK for the people of Burma in their struggle. While we are encouraged by the Secretary of State’s announcement that DFID will double aid to Burma by 2010, we hope they will expand on this pledge in light of the emerging level of cross-party support for quadrupling aid by 2013. We urge all government ministers to now act upon the clear recommendations from the debate, highlighting the messages through international relations and pushing forafull investigation into crimes against humanity in Burma.”
For more information, please contact Penny Hollings, Campaigns and Media Manager at Christian Solidarity Worldwide on 020 8329 0045, email pennyhollings@csw.org.uk or visit www.csw.org.uk.
The debate drew cross-party support. The Shadow Foreign Secretary, William Hague MP, called forabinding UN Security Council resolution and an arms embargo. The Liberal Democrats spokesman, Mark Hunter MP, called on the UK Government to disclose the names of British companies trading with Burma. The Chairman of the Foreign Affairs Committee, Labour MP Mike Gapes, and the Chairman of the Human Rights Committee, Labour MP Ann Clwyd, called for pressure on the Association of South-East Asian Nations (ASEAN), particularly Thailand, while other MPs highlighted the importance of China and India.
Forafull transcript of the debate, see http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200607/cmhansrd/cm071029/debtext/71029-0008.htm#0710299000002
Foracopy of the House of Commons International Development Committee report, DFID Assistance to Burmese Internally Displaced People and Refugees on the Thai-Burma Border, published on 25 July 2007, see www.parliament.uk/indcom
Foracopy of DFID’s Response, published on 23 October 2007, see www.parliament.uk/indcom
Posted by ကိုထိုက် at 00:337comments
Posted by ကိုထိုက် at 00:276comments
Posted by ကိုထိုက် at 00:046comments
Khun Sa, Ex-Drug Lord, Guerrilla, Dies
BANGKOK, Thailand (AP) — Khun Sa,adrug lord once described by the U.S. government as the world's largest producer of heroin, has died, an associate andaMyanmar official said Tuesday. He was 74.
Khuensai Jaiyen,aformer secretary of Khun Sa, said his former boss died Friday in Yangon, Myanmar's largest city, according to relatives. The cause of death was not immediately known, but Khun Sa had long suffered from diabetes, partial paralysis and high blood pressure.
Khun Sa once headedaguerrilla army and called himselfafreedom fighter. For nearly four decades, the charismatic warlord claimed to be fighting for autonomy for the Shan, one of many ethnic minorities who have long battled the central government of Myanmar, also known as Burma.
But narcotics agents around the world used terms like the "Prince of Death" to describe him, saying his organization relied on violence, murder, assassinations and bribery. At one point, Washington estimated that up to 60 percent of the heroin in the United States was refined from opium in his area and the U.S. once offereda$2 million reward for his arrest.
"They say I have horns and fangs. Actually, I amaking withoutacrown," he once told an Associated Press reporter, who visited his remote headquarters of Ho Mong — an idyllic valley near the Thai frontier inside Myanmar — after an 11-hour mule ride.
He preferred to paint himself asaliberation fighter for the Shan, heading up the Shan United Army — later the Mong Tai Army — in Myanmar's northeastern Shan State.
A Myanmar official in Yangon confirmed the death. Khun Sa was cremated Tuesday morning, said the official, who spoke on condition of anonymity because he is not authorized to speak to the media.
Khun Sa's body had been kept since Friday at Yay Way cemetery in Yangon's outskirts, where the cremation took place, saidacemetery worker who asked not to be named for the same reason.
Born ofaChinese father and Shan mother on Feb. 17, 1933, Khun Sa received little education but learned the ways of battle and opium from the Kuomintang, remnants of forces defeated by China's communists and forced to flee into Myanmar.
By the early 1960s Khun Sa, also known as Chang Chi-fu, had becomeamajor player in the Golden Triangle, then the world's major source for opium and its derivative, heroin.
He sufferedanear knockout blow in the so-called 1967 Opium War, fightingapitched battle with the Kuomintang in Laos. Laotian troops intervened by bombing both sides and making off with the opium.
Foratime he served in the Myanmar government militia, but was jailed in 1969 after allying himself with the Shan cause. He was freed five years later in exchange for two Russian doctors kidnapped by his followers.
The wily operator soughtaless hostile environment in Thailand, setting upahilltop base protected by his sizable Shan United Army. But the Thais were embarrassed by havingadrug kingpin on their soil and he was driven out in 1982 and lodged himself in Ho Mong.
There, the chain-smoking warlord entertained visitors with Taiwanese pop songs, grew orchids and strawberries, and directedaflow of heroin to addicts around the world.
Khun Sa claimed he only used the drug trade to finance his Shan struggle. He argued that only economic development in the impoverished Shan State, still one of the major sources of the world's heroin, could stop opium growing and its smuggling to the "drug-crazed West."
"My people grow opium. And they are not doing it for fun. They do it because they need to buy rice to eat and clothes to wear," he once said.
He offered to sell Washington the entire crop of opium in exchange for funds to implement his development plans for the Shans.
But in 1989, he was indicted for heroin trafficking by the U.S. District Court in New York and his extradition to the United States was requested.
Khun Sa continued to war with the central government and rival ethnic guerrilla groups like the Wa until 1996 when the junta, which had once threatened to hang him, offered him amnesty. He disbanded his Mong Tai Army of about 10,000 fighters and moved to Yangon.
Although difficult to confirm, reports said he livedalife of luxury inasecluded compound, having been awarded concessions to operatearuby mine along with other businesses.
There was speculation that he was still involved in the narcotics trade, which was largely taken over by his former enemies, the Wa.
Posted by ကိုထိုက် at 23:09 8 comments
ပဏာမအနေနဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာလမှာ ဖြစ်ပွားသွားတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက ၇ဟန်းရှင်လူပြည်သူတွေ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စွာ သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရပုံတွေကို ပြန်လည်သုံးသပ်လိုပါတယ်။ ဒီအဖြစ်အပျက် တွေမှာ ငြီမ်းချမ်းစွာ မေတ္တာပို့ဆဒ္ဒ ဖေါ်ထုတ်ခဲ့သူရဟန်းရှင်လူပြည်သူတွေအပေါ် သန်းရွှေနဲ့ စစ်အာဏာရှင်တစ်စုကလူမဆန်စွာ လက်နက်အားကိုးပြီး ခေတ်မှီ မောင်းပြန်သေနတ်၊ မျက်ရည်ယိုဗုံး ၊သစ်သားဒုတ်၊ သံဒုတ်တွေ သုံးပြီးဖြိုခွဲခဲ့တဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို ကမ္ဘာကသိမြင်နားလည်ကြလို့ အားလုံးကအပြင်းထန်ဆုံးရှုံ့ချနေကြပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ နှစ်ပေါင်း ၄၃ နှစ်လုံးလုံးစစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ စစ်ဖိနပ်အောက်က ရင်စည်းခံခဲ့ကြရတဲ့ ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့ ဘ၀တွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရလျှင် အောက်ပါအတိုင်း သိမြင်ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
၁ - အာဏာရှင်နေ၀င်းရဲ့ လက်အောက်မှာ ၂၆ နှစ်လုံးလုံး တိုင်းပြည်ကို ဆင်းရဲမွဲတေတဲ့ အထိ စီမံအုပ်ချုပ်သွားခဲ့ပြီး သန်းရွှေတို့ရဲ့ ဒုတိယစစ်မျိုးဆက်ကိုလက်ဆင့်ကမ်း လွှဲပြောင်းပေးသွားခဲ့ပါတယ်။
၂ - အာဏာရှင် သန်းရွှေလက်ထက်မှာတော့ တိုင်းပြည်ကိုအပြီးအပိုင် ကျွန်ပြုအုပ်ချုပ်နေကြပါပြီ။ အဆိုးဆုံးကတော့ ဘာသာ သာသနာ နဲ့တကွ သာသနာ့ဝန်ထမ်း ရဟန်းတော်တွေကို စနစ်တကျ အမြစ်ဖြတ် ချေမှုန်းသုတ်သင်နေကြပါပြီ။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ သမိုင်းတလျှောက်မှာ ဘယ်တုံးကမှ မရှိခဲ့ဘူးတဲ့ ယုတ်မာရက်စက်နည်းပေါင်းစုံနဲ့နှိပ်ကွပ်မှုမျိုးပါ။
ရဟန်းသံယာတွေကိုသတ်ဖြတ်ချေမှုန်းခြင်း၊ ဖမ်းဆီးထောင်ချခြင်း အဓမ္မသင်္ကန်းဆွဲချွတ်လူဝတ်လဲစေခြင်း အလုပ်ကြမ်းဖြင့်နယ်ခြားကချွေးတပ်စခန်းများသို့ပို့ခြင်း စတာတွေကို သိရှိရသူမြန်မာပြည်သူပြည်သားတိုင်း ရင်ထဲမှာကြေကွဲ ၀မ်းနည်း ကြရပါတယ်။
ရဟန်းရှင်လူတွေကို ရက်ရက်စက်စက် ချေမှုန်းအပြီး မှာလည်း လုပ်ကြံဇတ်လမ်း တွေခင်းပြီး ပါဝင်ပါတ်သက်သူတွေ သံဃာ လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ရဟန်းတုရဟန်းယောင် ထောင်ထွက် ဖေါက်ခွဲရေးသမားတွေ အဖြစ်နဲ့ သာသနာရေးဝန်ကြီး ကစွပ်စွဲ စော်ကားပြန်ပါတယ်၊ သာသနာ တော်ကိုပိုပြီးညိုးနွမ်း အောင်ပြုပြန်ပါတယ် ။
သန်းရွှေနဲ့ စစ်အာဏာရှင်တွေဟာ မြန်မာပြည်ကို ဘယ်လိုများ ကျွန်ပြုထားသလဲဆိုတာကိုတော့ အားလုံးစဉ်းစားကြည့်ကြပါ။
လူတွေအားလုံးကို အစစအရာရာလူနဲ့ မတူအောင်ချုပ်ချယ်ထားတယ်။ အဓမ္မလုပ်အားပေးခိုင်းတယ်။ လူငယ်တွေကို ချွေးတပ်ဆွဲပြီး နယ်ခြားကိုပို့တယ်၊ စစ်ဖက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေသယ်ယူရေးမှာ အသုံးပြုတယ်၊ ရပ်ကွက်တွေမှာ အတင်းအကြပ်အလှူငွေတွေ အတင်းထည့်ခိုင်းတယ်၊ သူတို့က်ိုထောက်ခံခိုင်းတယ်။
တိုင်းပြည်ရဲ့ အစိုးရလို့ အမည်ခံထားပေမဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ ကျန်းမာရေး ပညာရေး လူမှုရေး တွေကိုမျက်ကွယ်ပြုပြီး ဘာတာဝန်မှမယူဘဲ မိသားစုလိုက် ကိုယ်ကျိုးစီးပွာတွေဘဲ လုပ်နေကြတယ်။ ပြည်သူတွေ ထမင်းမ၀ပေမဲ့ စစ်အာဏာရှင်တစ်စု ကတော့အလွန်အမင်းကြွယ်ဝချမ်းသာနေကြတယ်။ မရေမတွက်နိုင်တဲ့ စိန်ရွှေ၇တနာတွေ ဇိမ်ခံအိမ်တွေကို ပြည်တွင်းပြည်ပမှာ ၀ယ်ယူထားကြပြီး နောက်ဆုံးပေါ်ကားတွေနဲ့ အမျိုးချစ်ဝါဒတွေ ကျင့်သုံးနေကြတယ်၊ နိုင်ငံရပ်ခြား ပြောင်းရွှေ့ အလုပ်လုပ်ကိုင်သူတွေထံက မြန်မာသံရုံးတွေကတဆင့် ဆက်ကြေးကောက်သလိုကောက်ခံပြိး သူတို့မိသားစု တွေရဲ့ အပျော်ဈေးဝယ်ထွက်စရိတ် ဆေးကုစရိတ် စတာတွေကို ကျခံစေပါတယ်။
ဒါတွေကို သိလို့ဆန့်ကျင်ရင် သို့မဟုတ် မကျေနပ်ကြောင်းပြရင် ဥမဒေမဲ့ ခြိမ်းခြောက်နှိပ်ကွပ်ပြန်ပါတယ်။
သူတို့ကိုဆန့်ကျင်သူမှန်သမျှကို အမျိုးမျိုးပုဒ်မတပ်ပြီးဖမ်ဆီး သတ်ဖြတ် နှိပ်စက် ပြတယ်၊ လိုချင်တဲ့သူကို ဖမ်းမမိရင် အိမ်ရှိ မိဘ မောင်နှမ နဲ့ သူငယ်ချင်း အစဖမ်းပြီး လူချင်းလဲအောင် လုပ်ပြကြတယ်။
မကြာသေးခင် စက်တင်ဘာအရေးအခင်းတုန်းက ဗွီဒီယိုပြကွက်တွေကိုပြန်ကြည့်ကြပါ။ ဆန္ဒပြပွဲမှာ သေနတ်ဒဏ်ရာရတဲ့အထဲ ရဟန်းတော်တစ်ပါးဟာ ရင်ဝမှာသွေးစက်လက်နဲ့ အားတင်းပြီး လျှောက်နေပုံကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
နောက်ဓါတ်ပုံတစ်ခုမှာတော့ ခေါင်းနဲ့ကျောတွေ ရင်တွေမှာ အညိုအမဲ စွဲအောင်ရိုက်ပြီး သတ်ဖြတ်ခံထားရတဲ့ ရဟန်းတော်တစ်ပါးရဲ့ အလောင်းကို ငမိုးရိပ်ချောင်းထဲမှာ ပေါ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ ရင်ထဲမှာ အဲဒါတွေကိုကြည့်ပြီး ရင်ကွဲပက်လက် ဖြစ်ခဲ့ကြရပါတယ်။ တုန်လှုပ်ခဲ့ကြရပါတယ်။ နောက်ပြကွက်တစ်ခုမှာတော့ လူငယ်တစ်ယောက်ကို စစ်ခွေး ၂ ကောင်က တလှည့်စီ စိတ်ရှိလက်ရှိ ပျော်ပျော်ကြီး ရိုက်နှိပ်ပြီး ကားပေါ်ကိုတက်ခိုင်းနေတဲ့ ပုံပါ။ ဒါကို ဗိုလ်တစ်ယောက်က ကွမ်းစားရင်း ပြုံးကြည့်နေပါသေးတယ်။
နောက်တစ်ခုက ဖမ်းဆီးခံ ဆန္ဒပြသူ တစ်ဦးကို စစ်သားတစ်ယောက်က ရိုက်နှက်လို့ လဲကြသွားစဉ် အခြားစစ်သားတစ်ယောက်က မျက်နှာကို စစ်ဖိနပ်နဲ့ကန် လည်မျိုကိုနင်းထားတဲ့ပုံပါဘဲ။ စစ်ဖိနပ်အောက် ရောက်နေကြသူ ပြည်သူတွေဘ၀ကို အလွန်အရိပ်ထင်စေတဲ့ ပြကွက်ပါ။
လူမြင်ကွင်းမှာတောင် ဒီလောက် ရက်စက် ကြမ်းကြုတ်နေကြရင် မျက်ကွယ်မှာ ဖမ်းဆီးခံသူတွေဆိုရင် ဘယ်လိုပြု ကြမယ်ဆိုတာ စဉ်းစားကြည့်ကြပါ။
အခြေအနေအရ အတည်မပြုရသေးတဲ့ သတင်းနဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေလဲ ရှိကြပါသေးတယ်။ ( ၂ ) ရက် အတွင်းသေဆုံးသူတွေကို သေနတ်ဒဏ်ရာဖြင့် မသေခင် မီးစက်ထဲကို အရှင်လတ်လတ် အထည့်ခံရတာကိုလဲ အနီးအပါးက မျက်မြင်တွေရဲ့ တွေ့ရှိချက်တွေအရ သိရပါတယ်။
တချို့သော ရဟန်းတော်တွေကို အတင်းအကြပ်လူဝတ်လဲ သံခြေ ချင်းခတ်ပြီး နှစ်ရှည်အလုပ်ကြမ်းနဲ့ ထောင်ဒဏ်တွေနဲ့ ကဘော်ချိုင့်ဝှမ်းလို ရာသီဥတုဆိုးဝါးပြီး အသက်ရှင်ဘို့ ခက်ခဲတဲ့ ဒေသတွေကို အပို့ခံကြရတယ်။
အချုပ်ပြောရရင်တော့ သန်းရွှေနဲ့ အပေါင်းပါတွေဟာ မြန်မာပြည်နဲ့ တမျိုးသားလုံးကိုကျွန်ပြုထားပါပြီ။ သာသနာတော်ကိုလဲ စနစ်တကျ မှေးမှိ်န်အောင် ပြုနေကြပါပြီ။ သူတို့ လက်သတ်မွေးထားတဲ့ လက်ညှိုးထောင်ခေါင်းငြိမ့် သံဃာအာဏာပိုင်တစ်ချို့ကလွဲပြီး အမှန်တရားနဲ့ လူထုဘက်ကရပ်တည်တဲ့ ကျန်ရဟန်းသံဃာတွေကို သတ်ဖြတ်ညှင်းဆဲပြီး စနစ်တကျ ရှင်းလင်းမှုတွေကိုလုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။
ညီအစ်ကိုမောင်နှစ်မများခင်ဗျား ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာ ငြိမ်းချမ်းမှုကို လိုလားပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းစွာဆွေးနွေးညှိုနှိုင်း အဖြေရှာခြင်းဖြင့် မြန်မာ့အရေးကို ဖြေရှင်းနိုင်ကြဖို့ကို လိုလားဆုတောင်းနေကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေကို လှည့်ဖြားလိမ်ညာပြီး တသက်လုံး ဖိနှိပ်လာခဲ့ သန်းရွှေနဲ့ အပေါင်းပါတွေကိုတော့ ချွင်းချက်မရှိ ယုံကြည်ဘို့ကိစ္စကတော့ မဖြစ်နိုင်သေးပါဘူး။ သတိနဲ့သာ အပြောနဲ့ အလုပ်ညီ၊ မညီစောင့်ကြည့်ကြပါလို့ သတိပေးလိုပါတယ်၊ ဒီတခါ ငြီမ်းငြီမ်းချမ်းချမ်းနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး လမ်းဆုံးပြီဆိုရင်တော့ ဘာလုပ်ကြမလဲဆိုတာ ကိုယ်စီကိုယ်ငှစဉ်းစား ထားစေချင်တာကတော့ .....
၁ - ကိုယ့်အမျိုးဘာသာသာသနာကို နောင်အနာဂါတ်အရေးဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲ
၂ - တနိုင်ငံလုံး သန်းရွှေနဲ့ စစ်အာဏာရှင် ခေါင်းဆောင်တစ်စုရဲ့ ကျွန်ဘ၀ စစ်ဖိနပ်အောက် ဘယ်လိုလွန်မြောက်အောင် လုပ်ကြမလဲ
၃ - နိုင်ငံနဲ့ လူမျိုးအတွက် လိုအပ်လာရင်တော့ အားလုံးသော အမျိုးကောင်း အမျိုးကောင်းသမီးများ ကိုယ်စီကိုယ်ငှ တာဝန်ကျေနိုင်ကြပါစေ။
Posted by ကိုထိုက် at 22:337comments
Posted by ကိုထိုက် at 00:02 14 comments
Posted by ကိုထိုက် at 23:547comments
ကလိုစေးထူးရေးတဲ့ ဆောင်းပါးလေးကို မဇ္ဈိမထဲမှာတွေ့လို့ ဆောင်းပါးက ကောင်းတာနဲ့ ခွင့်မတောင်းပဲ ဒီမှာ ပြန်ဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ်။ (တပြိုင်ထဲမှာပဲ၊ မဇ္ဈိမနဲ့ ကိုကလိုစေးထူးကို ဒီကနေ ခွင့်တောင်းလိုက်ပါတယ်။ .... ဆောရီးနော်။)
မြန်မာပြည်မှာ ယနေ့ ဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေကို ကောင်းမွန်တဲ့ အနေအထား တရပ်ဆီ ရောက်လာအောင် ဘက်ပေါင်းစုံက စဉ်းစားကြပါတယ်။ အဲဒီအထဲမှာကမှ စဉ်းစားမိကြတာ တခုကတော့ `စစ်တပ်ကို ပြည်သူ့ ဘက်တော်သား ဖြစ်လာအောင် ကြိုးစားကြတဲ့နည်း´ ပါပဲ။ စစ်တပ်သာ လူထုဘက် ပါလာရင် အာဏာရှင်ဟာ ဘယ်နည်းနဲ့မှ ရပ်တည်နိုင်တော့မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ယုံကြည် ကြပါတယ်။
စစ်တပ်ကို ပြည်သူဘက် ပါလာအောင် ကြိုးစားတာကို `စိတ်ကူးယဉ်တယ်´ လို့ တချို့က သတ်မှတ်ကောင်း သတ်မှတ်နိုင်ပေမယ့် အဲဒါဟာ သိမ်မွေ့စွာ ကြိုးစားလို့ ရနိုင်တဲ့ အရာတခု ဆိုတာကို ကျနော် ယုံကြည်ပါတယ်။
လူတဖက်သားကို ကိုယ့်ဘက် ပါလာအောင် စည်းရုံး ဆွဲဆောင်တဲ့ နေရာမှာ သူ့စိတ်ထဲမှာ ဘာတွေ ရှိနိုင်မလဲ၊ သူ လက်ရှိ ခံစားနေရတာက ဘာတွေ ဖြစ်နိုင်မလဲ၊ သူ ဖြတ်သန်းခဲ့တာက ဘာတွေ ဖြစ်မလဲ ဆိုတာကို တတ်နိုင်သလောက် အရင် လေ့လာဖို့ လိုမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
လူမြင်ကွင်းမှာတောင် မရှောင်၊ ရက်ရက်စက်စက် ပက်ပက်စက်စက် ရိုက်နှက်ချင်စိတ်တွေ ဖြစ်လာအောင် ဘယ်အရာတွေက တွန်းအား ပေးနေခဲ့သလဲ…၊ သာမန်အားဖြင့် ဖမ်းဆီး ချုပ်နှောင်ထားရုံနဲ့ လုံလောက်နေတဲ့ ကိစ္စကို အဲဒီလို အငြိုးတကြီးပုံစံနဲ့ ကန်ကျောက် ရိုက်နှက်ရလောက်အောင် သူတို့ရဲ့ စိတ်တွေ ခက်ထန် ကြမ်းတမ်းနေရခြင်းရဲ့ အရင်းခံက ဘာတွေ ဖြစ်နိုင်မလဲ ဆိုတာကို ကျနော် ဆန်းစစ် ကြည့်ချင်ပါတယ်။
အဲဒီလိုနဲ့ `စစ်တပ်ထဲမှာ…´ ဆိုတဲ့ စစ်တပ်ထဲက အဆင့် အမျိုးမျိုးနဲ့ ရပ်တည် ရှင်သန်ရတဲ့ စစ်သားတွေရဲ့ ဘဝတွေ အကြောင်းကို ကျနော် တွေ့မြင်ခဲ့ရတာ၊ ကျနော် လေ့လာ သိရှိခဲ့ရတာတွေနဲ့ ကျနော့်မိတ်ဆွေ စစ်သည်တော်များရဲ့ ရင်ဖွင့်ချက်တွေအပေါ် အခြေခံပြီးတော့ တင်ဆက် ဖော်ပြသွားပါမယ်။
အပြင်မှာ အရပ်သားဘဝ၊ ကျောင်းသားဘဝနဲ့ နေသားကျလာတဲ့ လူတွေရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို အဓိက ပြောင်းလဲပစ်ဖို့ အစပျိုးလိုက်တဲ့ အရာကတော့ စစ်သားတွေရဲ့ အဆဲအဆိုနဲ့ ကြမ်းတမ်းလှတဲ့ စရိုက်ပါပဲ။ အပြင်လောကမှာ ဆိုရင် ဘာမဟုတ်တဲ့ အပြစ်လို့ ယူဆကြတဲ့ အပြစ် သေးသေးလေးအတွက် မိဘက အမြတ်တနိုးထား၊ ချစ်သူက အမြတ်တနိုးထားတဲ့ ပါးကို `ဖြောင်း´ ခနဲနေအောင် အရိုက်ခံရ၊ မအေတွေ နှမတွေ ရစရာမရှိအောင် အသားလွတ် အဆဲခံလိုခံရ စတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေက အရပ်သားတွေ အတွက် အံ့အားသင့်တကြီး ဖြစ်သွားစေတဲ့ အပြင် စိတ်ကိုပါ ချက်ချင်း သိမ်ငယ် သွားစေလိုက်ပါတယ်။
အဲဒီလို အသားလွတ် အဆဲအဆို၊ အရိုက်အနှက် ခံရတာခြင်း အတူတူထဲကမှ တချို့ အတန်းပညာ အတန်အသင့် ရှိသူနဲ့ တာဝန်ခံတွေက မျက်စိကျသူ တချို့က စစ်သားလောင်း အချင်းချင်း ပြန်ကွပ်ကဲရတဲ့ Leader တာဝန် အပေးခံရတာတွေ ရှိပါတယ်။ အရိုက်ခံ၊ အဆဲခံနေရတဲ့ အခြေအနေကနေ ကိုယ်က ရိုက်ရ၊ ဆဲရတဲ့ အခြေအနေကို ရောက်သွားပြီ ဆိုရင်ပဲ အဲဒီ အရသာကို အဲဒီ ပုဂ္ဂိုလ်တွေက ခံစားတတ် သွားပါတယ်။ အရသာ တွေ့သွားပါတယ်။ ကိုယ့်ကို ကြောက်လို့ တုန်ယင်နေတဲ့ လူတယောက်ကို ပိုကြောက်လာအောင် သဟောက်သဟမ်း လုပ်ရင်းနဲ့ အကြမ်းဖက် စိတ်တွေက အဲဒီ လူတွေရဲ့ စိတ်ထဲမှာ အစပျိုးမှန်းမသိ အစပျိုးခဲ့ပါတော့တယ်။
အဲဒီလိုနဲ့ အဲဒီလူတွေ တပ်သားသစ် သင်တန်းကို ရောက်သွားပြီ ဆိုရင်ပဲ… `သင်တန်း ဖွင့်ပွဲမှာ လေ့ကျင့်ရေး တပ်မှူးက မိန့်ခွန်း ပြောတယ်။ မင်းတို့ အောက်မှာ မြေကြီးပဲ ရှိတော့တယ် ဆိုတာ မှတ်ထားကြတဲ့။ စစ်ထဲကို ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပဲ ရောက်လာ ရောက်လာ မင်းတို့ လက်ရှိ ရောက်နေတဲ့ ဘဝကို အကောင်းဆုံးလို့ မှတ်ယူပြီးတော့ သင်တန်းကို ပြီးဆုံးအောင် တက်ကြတဲ့´
စစ်သားတယောက်ရဲ့ အဆွယ်ကောင်းမှုကြောင့် အသက်မပြည့်ခင် စစ်ထဲဝင်သွားလို့ ပင်လောင်းမြို့က
အမှတ်(၄) လေ့ကျင့်ရေးတပ် အထိ ငွေအား၊ လူအားနဲ့ မရမက ပြန်ထုတ်ယူခဲ့ရတဲ့ ကျနော့် ညီက သူ့အတွေ့အကြုံကို ပြန်ပြောပြပါတယ်။
အဲဒီလိုမျိုး အရာရာတိုင်းမှာ အောက်ကျနောက်ကျ ခံရ၊ အနှိမ်ခံရတာ ကြာလာတော့ တပ်သားသစ်တွေရဲ့ စိတ်ထဲမှာ တခုခုကို ပေါက်ကွဲပစ်ချင်တဲ့ အငုပ်စိတ်က စပြီး အခြေ တည်လာပါတော့တယ်။ သာဓကအားဖြင့် ပြောရရင် တပ်သားသစ် အချင်းချင်း အုပ်ချုပ်ရ လွယ်ကူအောင် ခန့်အပ်ထားတဲ့ တပ်သားသစ် တပ်စုမှူး၊ တပ်ခွဲမှူး တွေဟာ သင်တန်းနည်းပြ စစ်သားတွေထက်တောင် အရိုက်အနှက်မှာ ပိုလက်သံပြောင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ထောင်ဝါဒါ၊ ထောင်တန်းစီးတွေရဲ့ စိတ်ထားနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင် တူမလားပါပဲ။
လေ့ကျင့်ရေးကျောင်းတွေရဲ့ အင်မတန်မှ မှားယွင်းတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တခုကို တင်ပြချင်ပါသေးတယ်။ အဲဒါကတော့ တပ်သားသစ်တွေထဲက စစ်တပ်ထဲကို နောက်တကြိမ် ထပ်မံ ဝင်လာသူ စစ်ပြေးများကို နေရာ ပေးတာပါပဲ။ စစ်တပ်ထဲက ထွက်ပြေးလိုက်၊ စစ်တပ်ထဲကိုပဲ ပြန်ဝင်လိုက် လုပ်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို စစ်စည်းကမ်းအရ အရေးယူရမယ့်အစား အင်အား လိုအပ်ချက်ကိုပဲ ကြည့်ပြီးတော့ ပြန်လည် လက်ခံသေးတဲ့အပြင် အဲဒီလူတွေကို အဆောင်မှူး၊ တပ်စုမှူး အဖြစ်ပါ နေရာပေး တာဝန် ခန့်အပ်လိုက်တာဟာ စစ်သားတွေရဲ့ စိတ်ကို ပိုမိုခက်ထန် လာစေတဲ့ အစပျိုးချက် တချက်ပါပဲ။ နေရာရခိုက်မှာ ကိုယ့်အောက်က လူကို များများ နှိပ်ကွပ်လေလေ ကိုယ်က ပိုသက်သာလေလေဆိုတဲ့ မကောင်းတဲ့ အခြေခံစိတ်က အဲဒီက စပါတယ်။
ဘလော့ဂ်တခုမှာ ရေးထားတာကို တွေ့လိုက်ပါတယ်။ `တပ်မတော် ပျက်ကြောင်း ကြည်းသုံးသောင်း´ တဲ့။ ကျနော် လေ့လာထားဖူး သလောက်ကတော့ အဲဒီလို မဟုတ်ပါဘူး။ အတန်ငယ် လိုနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ စကားရဲ့ အခြေခံက စစ်တပ်ထဲကို နောက်ကျမှ ဝင်လာတဲ့ လူတွေကို နှိမ်တဲ့ သဘောပါ။ စကားအမှန်က `တပ်မတော် ပျက်ကြောင်း တဝမ်းပူ မျဉ်းစောင်း ကြည်းသုံးသောင်း´ ပါ။ အဲဒီလို ခေါ်ရခြင်းက ဒီလိုပါ။
ဟိုးအရင်က အခြားအဆင့်တွေအတွက် ကိုယ်ပိုင်အမှတ်က ဂဏန်း ခြောက်လုံးအထိ ရှိပါတယ်။ ဥပမာ တပ်သား မောင်ဖြူ၊ ကိုယ်ပိုင် အမှတ် ၄၅၆ ၇၈၉ …။
အခြားအဆင့် စစ်သည်တယောက်ဟာ ဘယ်လောက်ပင် ထက်မြက်နေပါစေ၊ အရာရှိ တယောက်ရဲ့ မလို မုန်းထားမှုကို ခံရရင် ဘယ်တော့မှ ရာထူး တိုးမြှင့်ခံရခြင်း မရှိပါဘူး။ အရာရှိနဲ့ အဆင်မပြေလို့ ရာထူးတိုးတာ ဆိုင်းငံ့ခံရတဲ့ အခြားအဆင့် စစ်သည်တွေ စစ်တပ်ထဲမှာ မနည်းလှပါဘူး။
ဒီကြားထဲ စစ်တပ်ထဲကလည်း ထွက်ချင်တိုင်း ထွက်လို့က မရ။ (စစ်တပ်ထဲမှာ ငါးနှစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်ပြီးရင် ထွက်ခွင့် ရှိတယ်လို့ သတ်မှတ်ချက် ရှိပေမယ့် တကယ်တမ်းမှာ တပ်က ထွက်ခွင့် မပေးကြပါဘူး)။ ဒီလိုနဲ့ပဲ မနေချင်တဲ့ စစ်တပ်ထဲမှာ မထူးကြုံးကြုံးပြီး နေနေရတဲ့ အခြားအဆင့် စစ်သည်တွေ တနေ့တခြား ပိုပို များလာပါတယ်။
တကယ်တော့ စစ်တပ်ထဲမှာ အခြားအဆင့် စစ်သည်ဟာ ပြန်တမ်းဝင် အရာရှိတွေရဲ့ အဖြည့်ခံ သက်သက်သာ ဆိုရင် မမှားပါဘူး။ တပ်ရင်းမှူးအိမ်မှာ တပ်ရင်းမှူးကတော် အဝတ်အစားက အစ လျှော်ဖွတ်ပေးရတဲ့ စစ်သား၊ ဗိုလ်မှူးအတွက် အရက် ဝယ်ပေးရတဲ့ စစ်သား၊ ဗိုလ်ကြီးအတွက် အပျော်မယ် ရှာပေးရတဲ့ စစ်သား စသဖြင့် စစ်စည်းကမ်းနဲ့ ဘာမှမဆိုင်တဲ့ အလုပ်တွေမှာ တရားမဝင်စွာနဲ့ အနှိမ်ခံ အနင်းခံ အခြားအဆင့် စစ်သည်တွေဟာ စစ်တပ်ထဲမှာ မပျော်မွေ့ကြပေမယ့် ခြိမ်းခြောက်မှု မျိုးစုံကြောင့် ဆက်နေကြရရင်းနဲ့ အမျိုးအမည် ပေါင်းစုံသော ထွက်ပေါက်မဲ့ မကျေနပ်မှုတွေက သူတို့ရဲ့ ရင်ထဲကို ကိန်းအောင်းနေခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာပြည် စစ်တပ်မှာ ဒုတိယ တပ်ကြပ်အဆင့်ကနေ အရာခံဗိုလ် အဆင့်အထိကို ပြန်တမ်းမဝင် အရာရှိများလို့ သတ်မှတ်ပြီးတော့ ဒုတိယဗိုလ်မှ အထက်အဆင့်ကိုတော့ ပြန်တမ်းဝင် အရာရှိလို့ သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ စစ်တပ်ထဲမှာကတော့ ဒုတိယ ဗိုလ်ကနေ အထက်ကို ခပ်လွယ်လွယ်ပဲ `အရာရှိ´ လို့ သတ်မှတ်ကြပါတယ်။
စစ်တက္ကသိုလ် ဗိုလ်လောင်း သင်တန်းကို ယခင်ကတော့ လေးနှစ်တက်ရောက် စေခဲ့ပေမယ့် ယခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ သုံးနှစ်သာ တက်ရောက်စေပါတယ်။ သင်တန်းဆင်းရင် ဘွဲ့ရတယောက်အဖြစ် ပညာ အဆင့်အတန်း သတ်မှတ်ပေးပြီးတော့ ဒုတိယဗိုလ် ရာထူးပေးပါတယ်။ စစ်တက္ကသိုလ် ဗိုလ်လောင်း သင်တန်းအတွက် ပညာ အရည်အချင်း သတ်မှတ်ချက် အခြေခံပညာ အထက်တန်းကို (က) အဆင့်မှ အောင်မြင်ရပါမယ်။ (တပ်မတော် ဆေးတက္ကသိုလ်၊ အင်ဂျင်နီယာ တက္ကသိုလ်၊ အစရှိတဲ့ စစ်တက္ကသိုလ်တွေကိုတော့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဝင်ခွင့်အမှတ်ကို မှီရပါတယ်။)
စစ်တပ်ထဲမှာ အရာရှိများရဲ့ ရာထူး တိုးမြှင့်ပုံနဲ့ အခြားအဆင့် စစ်သည်တွေရဲ့ ရာထူး တိုးမြှင့်ပုံကတော့ ကွာခြားပါတယ်။
အရာရှိ တယောက်ဟာ တစုံတရာ စစ်စည်းကမ်း ဖောက်ဖျက်မှု တခုခု ကျူးလွန်တာ မရှိခဲ့ရင်၊ တနည်းအားဖြင့် ပြစ်မှု တခုခုကို ကျူးလွန်ခြင်း တစုံတရာ မရှိခဲ့ရင် ဒုတိယဗိုလ် လုပ်သက် တနှစ် ပြည့်မြောက်တဲ့အခါ ဗိုလ်အဆင့်ကို တိုးမြှင့်ခံရပါတယ်။ ဗိုလ်လုပ်သက် သုံးနှစ် ပြည့်တာနဲ့ ဗိုလ်ကြီးအဆင့်ကို အလိုအလျောက် တိုးမြှင့်ခံရပါတယ်။ ဗိုလ်ကြီးလုပ်သက် ခုနှစ်နှစ်ပြည့်တဲ့ အချိန်မှာ အသက်လေးဆယ် မပြည့်သေးခဲ့ရင် တပ်ခွဲမှူး/ ဗိုလ်မှူး ဗိုလ်မှူး(ဗိုလ်ကြီး) အဖြစ် ခြေလျင်/ခြေမြန် တပ်ရင်းတခုခုမှာ တနှစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးနောက် ဗိုလ်မှူးအဆင့်ကို တိုးမြှင့်ခံရပါတယ်။
စစ်သားအလုပ်ဆိုတာ တကယ်တော့ အသက်အန္တရာယ် နီးတဲ့အလုပ်၊ သူတကာထက် ပိုမိုပင်ပန်းရတဲ့ အလုပ်လို့ သာမန်အားဖြင့် သိထားကြပေမယ့် ပင်ပန်းကြတာခြင်း အတူတူ အခွင့်အရေး နည်းပါးလှတာ၊ ဒါမှမဟုတ် အခွင့်အရေး လုံးဝ မရှိတာက အခြားအဆင့် စစ်သည်တွေသာ ဖြစ်ပြီးတော့ အရာရှိတွေ အတွက်ကတော့ ရာထူး ကြီးလာလေလေ ရလာမယ့် စည်းစိမ် ဥစ္စာတွေက များလာလေလေ၊ အခွင့်အရေးတွေက တိုးလာလေလေ ပါပဲ။
သာမန်အားဖြင့် ဗိုလ်ကြီးအဆင့် မရောက်သေးသူ စစ်ဗိုလ်ပေါက်စတွေအတွက် တပ်ထဲက လာဘ်လာဘ ဝင်လမ်းက နည်းလှပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ဗိုလ်ကြီးအဆင့်ကို ရောက်လို့ တိုင်း/တပ်မတွေမှာ စစ်ဦးစီး အရာရှိ (တတိယတန်း) နေရာကို ရပြီ ဆိုတာနဲ့ သူတို့အတွက် ငွေဝင်လမ်းက စပါတော့တယ်။ အရပ်ဘက်နဲ့ ဆက်ဆံရမှု များလေလေ၊ ငွေဝင် များလေလေပါပဲ။ အလွန်သေးငယ်တဲ့ ကျနော်တို့ နယ်မြို့ကလေးမှာတောင် မှောင်ခိုဆိုင်ကယ်တွေ၊ ကားတွေ တင်သွင်းတဲ့ လူတွေဆီက အေးဓမြ တိုက်တဲ့ ဝင်ငွေနဲ့ ဗျူဟာရုံးက စစ်ဗိုလ်များ အလွန်အင်မတန် ငွေထွားကြပါတယ်။
ရန်ကုန်ကို ရောက်ခိုက်မှာ အကိုဝမ်းကွဲ ဆေးတက္ကသိုလ် ကျောင်းသားက အဲဒီလို ပြောပြခဲ့ဖူးပါတယ်။
တကယ်တော့ အုပ်ချုပ်သူ အာဏာပိုင်တွေဟာ လူငယ်တွေကို အဲဒီလို ဖြစ်အောင်ကို တမင် လုပ်ယူခဲ့တာပါပဲ။ အပြင်လောကမှာ အရပ်သား ပညာတတ်တွေ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပါးလျားလာအောင် လုပ်ယူရင်းနဲ့ စစ်တပ်ထဲကို လူငယ်တွေ များများ ရောက်လာစေတဲ့ နည်းကို တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဆွဲဆောင် ယူခဲ့တာပါပဲ။ အခုဆိုရင် တပ်မတော် စစ်တက္ကသိုလ်၊ တပ်မတော် ဆေးတက္ကသိုလ်၊ တပ်မတော် အင်ဂျင်နီယာ တက္ကသိုလ်၊ တပ်မတော် သူနာပြု တက္ကသိုလ်၊ တပ်မတော် နည်းပညာ တက္ကသိုလ် အစရှိသဖြင့် အသက် မွေးဝမ်းကျောင်း ဆိုင်ရာ လူငယ်တွေ မျက်စိကျလောက်တဲ့ တက္ကသိုလ် အမျိုးမျိုးကို တပ်မတော် အမည်နဲ့ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။
အကောင်းဘက်က တွေးမယ်ဆိုရင်တော့ စစ်တပ်ထဲမှာ ပညာတတ်တွေ များလာတော့ ဆင်ခြင်တုံတရား ရှိသူ ပညာတတ်လူငယ် စစ်ဗိုလ်လေးတွေ များလာလေလေ နောင်အနာဂတ် စစ်တပ်အတွက် ပိုကောင်းလာမယ်လို့ တွေးစရာ ရှိပေမယ့် `စစ်ဗိုလ်ကွ၊ သူ့ကုသိုလ်နဲ့ သူဖြစ်လာတာ၊ ဘာမှ မနာလိုမရှိနဲ့၊ ဖြစ်ချင်တိုင်း ဖြစ်လို့ရတာ မဟုတ်ဘူး´ ဆိုတဲ့ အမြင်မျိုးရှိတဲ့ စစ်ဘိုပေါက်စတွေ မြန်မာပြည်မှာ ပိုများလာရင်တော့ တိုင်းပြည် အနာဂတ်အတွက် ရင်လေးစရာ ကောင်းပါတယ်။ `အာဏာ´ ဆိုတဲ့ အရာက လူမိုက်တွေလက်ထဲ ရောက်သွားရင် ဘယ်လောက် ကြောက်စရာ ကောင်းတယ်ဆိုတာ လက်ရှိ ကျနော်တို့ နိုင်ငံ အခြေအနေက သက်သေပါပဲ။
စစ်တပ်တွင်းမှာ အရာရှိ အချင်းချင်း တရားဝင် မဟုတ်ပေမယ့် မသိမသာ ခွဲခြားထားမှုကို တင်ပြချင်ပါ
အခြားအဆင့်ကနေ စစ်ဗိုလ်ဖြစ်သူများဟာ များသောအားဖြင့် ဘွဲ့ရသူတွေ မဟုတ်တာ များပါတယ်။ တပ်ကြပ်ကြီး စာရေး တချို့ကနေ ဗိုလ်သင်တန်း အောင်သူများ တချို့နဲ့ အသက်(၂၅) နှစ်အောက် ဘွဲ့ရ၊ အရပ်သားများမှ ဗိုလ်သင်တန်း အောင်သူများသာ ဘွဲ့ရတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ အရာရှိငယ် ဘဝမှာ အဲဒါတွေက မသိသာသေးပေမယ့် ဗိုလ်မှူး အဆင့်ကို ရောက်ရင်တော့ `တပ်ရင်းမှူး သင်တန်း´ တက်ခွင့်အတွက် `တက္ကသိုလ် တခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိပြီးသူ ဖြစ်ရမည်´ ဆိုတဲ့ စည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက်က အခြားအဆင့်မှ စစ်ဗိုလ် ဖြစ်လာသူ အများစုကို ဗိုလ်မှူး ဘဝမှာတင် ရာထူး ရပ်သွားစေတဲ့ အဓိက အချက်ပါပဲ။ စစ်တက္ကသိုလ် ဗိုလ်လောင်း ဆင်းတွေကတော့ အဲဒီအတွက် မပူမပင်ရစွာနဲ့ပဲ ရာထူး အဆင့်ဆင့်ကို တက်ခွင့် လမ်းက ဖြူးနေပါတယ်။
နောက်တချက်ကတော့ တကယ့် တကယ်တမ်း သေရေးရှင်ရေး စစ်ဆင်ရေး နေရာတွေကို သွားရောက်ရတဲ့ အရာရှိငယ် အများစုဟာ အခြားအဆင့်မှ ဗိုလ်သင်တန်း အောင်လာတဲ့ အရာရှိ အများစု ဖြစ်နေကြတာပါပဲ။ စစ်တက္ကသိုလ်ဆင်း အရာရှိတွေကတော့ ရှေ့တန်းထွက်ရလည်း ခဏပါပဲ။ အချိန်တန်ရင် တိုင်း/တပ်မတွေမှာ စစ်ဦးစီး အရာရှိအဖြစ် လျောလျောရှူရှူ လျင်လျင်မြန်မြန် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခွင့် ရကြတာလဲ စစ်တက္ကသိုလ်ဆင်း စစ်ဗိုလ်တွေက ပိုများတယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။
အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ကျနော် အဝေးသင် တတိယနှစ် ဖြေဆိုရစဉ်တုန်းက သိကျွမ်း ခင်မင်ခဲ့ရတဲ့ သင်္ဃန်းညီနောင် အခြေစိုက် တပ်ရင်းတရင်းမှ စစ်ဗိုလ် တဦးက သူ အဝေးသင် လာဖြေခိုက်မှာ အခုလို ရင်ဖွင့်ခဲ့ပါတယ်…
`တကယ်တော့ကွာ၊ ငါတို့ အခြားအဆင့်က စစ်ဗိုလ်တွေ ဆိုတာက စစ်တုရင်ခုံက နယ်ရုပ်လေးတွေနဲ့ အတူတူပါပဲကွာ၊ ဘုရင်ကြီး ကောင်းစားဖို့ ချကျွေး ခံရလိုခံရ၊ တခါတလေ ဘီးရှော့တို့၊ မြင်းတို့ နေရာကောင်း ရဖို့အတွက် ချကျွေးခံရလို ခံရ၊ ကံအင်မတန်ကောင်းလို့ ဟိုးဘက်ထိပ် ရောက်သွားတဲ့ နယ်ရုပ် တရုပ်တလေကသာ ပါဝါတခုခု တိုးရသွားသလိုပါပဲ။ အခြားအဆင့် တယောက်ကို စစ်ဗိုလ်ရာထူး ပေးတယ်ဆိုတာ သူများ မနေချင်တဲ့ နေရာ၊ သူများ မသွားချင်တဲ့ နေရာတွေအတွက် ကွက်လပ် ဖြည့်ချင်တာပါပဲ´
ကျနော့် အမြင်အရ သုံးသပ်ကြည့်ရရင်တော့ အဲဒီ စစ်သားတချို့ စစ်ဖိနပ် စီးမထားရခြင်းရဲ့ ဖြစ်နိုင်ခြေ နှစ်ချက်ကို စဉ်းစားလို့ရပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့…
ပထမတချက်ကတော့ ဆန္ဒပြပွဲတွေကို နှိမ်နင်းဖို့အတွက် တာဝန် ယူထားကြတဲ့ စစ်တပ်တွေ အားလုံးဟာ သူတို့ တည်းခိုတဲ့ နေရာတွေမှာ အမြဲတစေလိုလို Standby အဖြစ်နဲ့ အဆင်သင့် အနေအထားမှာ ရှိနေကြရပါတယ်။ တခါတရံမှာ သူတို့ရဲ့ နားနေချိန်၊ ထမင်းစားချိန် ရောက်တဲ့အခါ ပူပြင်းလှတဲ့ မြန်မာပြည် ရာသီဥတုနဲ့ သိပ်အဆင်မပြေလှတဲ့ စစ်ဖိနပ်တွေကို ခဏတာဖြစ်ဖြစ် ချွတ်ထားတတ်ကြပါတယ်။ အဲဒီလို ချွတ်ထားပြီး သက်တောင့်သက်သာ ဖြစ်တဲ့ ညှပ်ဖိနပ်ကို ဝတ်ဆင်ထားခိုက်မှာ အထက်အမိန့်အရ ဆန္ဒပြပွဲတွေကို နှိမ်နင်းဖို့ အမြန်ဆုံး ထွက်ခွာရတော့ စစ်ဖိနပ်ကို ပြန်မစီးအားတော့ဘဲ အချိန်တိုတွင်း တန်းစီ၊ လူစစ်ပြီး အခင်းဖြစ်ရာကို ရောက်အောင် သွားကြတဲ့အတွက် သူတို့ ခြေထောက်တွေမှာ ခြေညှပ်ဖိနပ်တွေ စီးလျက်သား ဖြစ်နေကြတာပါ။
ဒုတိယ တချက်ကတော့ တချို့ စစ်သားတွေဆီမှာ စီးစရာ စစ်ဖိနပ် မရှိတာပါပဲ။ စစ်ရေးပြ ဖိနပ်၊ တောစီး ဖိနပ် အစရှိတဲ့ စစ်ဖိနပ် နှစ်မျိုးအနက် ဘယ်စစ်ဖိနပ်မှ စီးစရာ မရှိတဲ့အတွက် တချို့ စစ်သားတွေရဲ့ ခြေထောက်မှာ ခြေညှပ် ဖိနပ်တွေနဲ့ ဖြစ်နေကြတာပါ
တကယ်တော့ စစ်ထဲကို ဝင်ကြသူတိုင်းအတွက် စစ်အသုံးအဆောင် ပစ္စည်း အစုံအလင်ကို တပ်က ထုတ်ပေးပါတယ်။ အဲဒီအပြင် စစ်ပစ္စည်း တခုခြင်းအလိုက် သက်တမ်း သတ်မှတ်ချက်နဲ့ လဲလှယ်ပေးရမယ့် စည်းကမ်းလဲ စစ်တပ်ထဲမှာ ရှိပြီးသားပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အောက်ခြေအဆင့် အခြားအဆင့် စစ်သည် အတော်များများက အဲဒီ စစ်ပစ္စည်းတွေကို ရောင်းစားပစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ စစ်ပစ္စည်း မှောင်ခိုဈေးကွက် ဘယ်လောက်ကြီးတယ် ဆိုတာကိုတော့ မင်္ဂလာဒုံ ဈေးထဲက စစ်ပစ္စည်း အရောင်းဆိုင်တွေက သက်သေပါပဲ။ ငွေသာ ပေးနိုင်ရင်၊ ဘာသက်သေ အထောက်အထားမှ မရှိဘဲနဲ့ စစ်တပ်သုံး ပစ္စည်းတွေကို အဲဒီဈေးမှာ အလိုရှိသလောက် ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ စစ်သား အတော်များများမှာ စစ်ဝတ်ချပ်တန်ဆာ မစုံမလင်နဲ့ နောက်ဆုံး စစ်ဖိနပ် စီးစရာတောင် မရှိတော့တဲ့ စစ်သား ဖြစ်ရတော့တာပါပဲ။
စစ်တပ်က စားစရာရိက္ခာ၊ သုံးစရာ လစာ ပေးထားပါလျက်နဲ့ အောက်ခြေ စစ်သားတွေက သူတို့ရဲ့ စစ်အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းတွေကို ရောင်းစားပစ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းကတော့ နဂိုကတည်းကိုက ဘာခံယူချက်မှ မရှိဘဲ အကြောင်းမျိုးစုံနဲ့ စစ်တပ်ထဲ ရောက်လာသူ စစ်သားတွေက စဉ်းစားဆင်ခြင်ဉာဏ် နည်းလှစွာနဲ့ စစ်ပစ္စည်း ရောင်းစားလို့ ရတဲ့ငွေစ တချို့နဲ့ မူးရူးပျော်ပါး သောက်စားလိုတာက တချက်၊ နောက်တချက်ကတော့ သူတို့ရဲ့ ရိက္ခာနဲ့ လစာတွေကို အထက် အရာရှိ တချို့က ရသင့်တဲ့အတိုင်း မပေးဘဲ ခိုးယူ ဖြတ်တောက်ပြီး ကိုယ်ကျိုးအတွက် အသုံးချကြတာကြောင့် စစ်ပစ္စည်းရောင်းလို့ ရတဲ့ ငွေစလေးနဲ့ လတ်တလော အဆင်ပြေသွားရင် ပြီးရော ဆိုပြီး ရောင်းစား ပစ်ကြတာပါပဲ။
ကျနော် စစ်ဆင်ရေး အထမ်းသမား ပေါ်တာအဖြစ် လိုက်သွားခဲ့ရစဉ် တုန်းကဆိုရင် အပေါ်ပိုင်းမှာ စစ်အင်္ကျီ၊ ခါးအောက်ပိုင်း ကျတော့ အရပ်ဝတ် အားကစား ဘောင်းဘီတို၊ ထိုင်း ညှပ်ဖိနပ်နဲ့ ရှေ့တန်းလိုက်ကြတဲ့ စစ်သားတွေကို တွေ့ခဲ့ရဖူးပါတယ်။
စစ်တပ်က ပေးတဲ့ ရိက္ခာက တကယ့် အတိအကျဆိုရင် စားဖို့ လုံလောက်ပါတယ်။ အာဟာရလည်း ပြည့်ဝပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တပ်ထဲက တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ အဆင့်ဆင့် ဖြတ်တောက် လာဘ်စားမှုရဲ့ ဒဏ်တွေကို ခါးစည်းခံရပြီး အစားအစာ မဝမလင်၊ အဝတ်အစား မတောက်မပြောင်နဲ့ လူတောမတိုး ဖြစ်ကြရတာကတော့ အောက်ခြေအဆင့် စစ်သားအများစုပါပဲ။ ကျနော့်ညီလေး တက်ရောက်ခဲ့ရတဲ့ တပ်သားသစ် သင်တန်းမှာ ဆိုရင် သင်တန်းသား တပ်သားသစ်တွေဟာ အမြဲတမ်းလိုလို ဆာလောင် နေကြပါတယ်တဲ့။
လစာနဲ့ ရိက္ခာစာရင်းကို အထက်ဌာန အဆင့်ဆင့်ကို တင်ပြတဲ့အခါ စည်းကမ်းပျက်တဲ့ စစ်ဗိုလ် အချင်းချင်း စည်းဝါး ရိုက်ပြီးတော့ တပ်တွင်းမှာ အမှန်တကယ်ရှိတဲ့ အင်အားထက် ပိုမို တင်ပြ တောင်းခံပေမယ့် အောက်ခြေကိုကျတော့ အဲဒီ ရိက္ခာနဲ့ လစာတွေကို လုံလုံလောက်လောက် ပြန်မပေးတာဟာ အကြီးမားဆုံး တပ်တွင်း ခြစားမှုကြီး ဖြစ်သလို တပ်မတော်အတွက် သုံးစွဲတဲ့ တိုင်းပြည်ရဲ့ ဘဏ္ဍာတော်ကိုလည်း လွန်စွာမှ ပြုန်းတီးစေပါတော့တယ်။
စစ်ဗိုလ်ဖြစ်ခွင့် မရှိတဲ့ အခြားအဆင့် စစ်သည်တယောက် အဖို့ စစ်မှုထမ်းသက် ကြာမြင့်လာခြင်း၊ ရာထူး တိုးမြှင့်ခြင်းဟာ သူ့ဘဝရဲ့ တိုးတက်မှုကို ဘာမှ အာမခံချက် မပေးနိုင်ပေမယ့် စစ်ဗိုလ် အရာရှိတယောက် စစ်တပ်ထဲမှာ ကြာလာတာနဲ့ အမျှ ရာထူးတွေ မြင့်မြင့် လာလေလေ၊ ဝင်ငွေလမ်း ဖြောင့်လာလေလေ ဖြစ်နေတာဟာလည်း စစ်တပ်ထဲက အခြားအဆင့် စစ်သည်တွေအတွက် စိတ်ဓာတ် ပျက်ပြားစေတဲ့ အကြောင်းရင်း တရပ်ပါပဲ။
စစ်ဗိုလ်တွေအတွက်ကတော့ အသက် ၆၀ ပြည့်တဲ့ အချိန်မှာ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရာထူး ရှိသူဟာ ၆၅ နှစ်အထိ တပ်မတော်မှာ တာဝန်ထမ်းခွင့် ရှိတယ်လို့ သတ်မှတ်သေးတဲ့ အပြင် စစ်တပ်ရဲ့ ရာထူး အကြီးမြင့်ဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တိုင်က အသက် ၇၀ ကျော်လွန်သည့် တိုင်အောင် စစ်တပ်က မထွက်ဘဲ ခပ်တည်တည်နဲ့ စစ်စည်းကမ်းဖောက်လို့ စစ်စည်းစိမ်ကို ခံစားနေဆဲပါပဲ။
တနည်းနည်းနဲ့ စစ်တပ်က ထွက်ခွင့် ရကြပြန်တော့လည်း စစ်မှုထမ်းဟောင်းခြင်း အတူတူ စစ်ဗိုလ်ဟောင်းကြီးတွေက အရပ်ဘက် ဌာနဆိုင်ရာတွေမှာ ဘာမှမသိ မတတ်လည်း ညွှန်မှူးတွေ ညွှန်ချုပ်တွေ ဖြစ်လိုဖြစ်နဲ့ ဆက်လက် ကောင်းစားနေကြပေမယ့် အခြားအဆင့် စစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေ အတွက်ကတော့ အခွင့်အရေးတွေက နည်းပါးလွန်းလှပါတယ်။ ရင်နင့်စရာ ကောင်းတာကတော့ လူစည်ကားရာ နေရာတွေမှာ တွေ့ရတတ်လေ့ရှိတဲ့ စစ်ပြန် ဒုက္ခိတ သူဖုန်းစားတွေပါပဲ။ ပြည်သူတွေက နဂိုကတည်းကမှ စစ်တပ်ကို မုန်းရတဲ့အထဲ စစ်တပ်ထဲမှာ တာဝန် ထမ်းဆောင်မိလို့ ဒုက္ခိတ ဖြစ်ရတော့လည်း တပ်ကထွက်ပြီး တောင်းရမ်း စားသောက်နေရတဲ့ ဘဝပါ။
တကယ်တော့ စစ်သားဆိုတာဟာ ပြည်သူထဲက ပြည်သူပါလို့ အားလုံးက နားလည် ထားကြပြီးသားပါပဲ။ အာဏာကို ဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့ လူတစုက `တပ်မတော်သာ အမိ၊ တပ်မတော်သာ အဖ´ လို့ ကြွေးကြော်ပြီး စစ်တပ်ကို သူတို့ကိုယ်ကျိုးအတွက် လက်ကိုင်တုတ် အဖြစ်အသုံးချနေပေမယ့် တပ်မတော်ရဲ့ မိဘဟာ ပြည်သူတွေပါပဲ။
တကယ်တော့ အာဏာပိုင်တွေဟာ ဒီအချက်အလက်ကို ကောင်းကောင်း နားလည်တဲ့ အတွက်ကြောင့် ပြည်သူထဲက ပြည်သူ့စစ်သားနဲ့ သူတို့ရဲ့ အမိအဖ မောင်နှမ ပြည်သူတွေကို သွေးကွဲအောင် စနစ်တကျ လုပ်ဆောင်ပါတယ်။ တပ်သားတွေကို သတင်းမီဒီယာ အမှောင်ချခြင်း၊ ပြည်သူနဲ့ ထိတွေ့ခွင့် နည်းနိုင်သမျှ နည်းအောင် ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ အာဏာပိုင်တွေရဲ့ မူဝါဒကို ထပ်ခါတလဲလဲ နားရည်ဝအောင် ရိုက်သွင်းထားခြင်း စတဲ့ နည်းမျိုးစုံနဲ့ ပြည်သူနဲ့ စစ်တပ်ကို တသီးတခြားစီ ဖြစ်အောင် စနစ်တကျ လုပ်ဆောင်ပါတယ်။
ထင်ရှားတဲ့ အချက်အလက် တခုကို တင်ပြရမယ်ဆိုရင် ၁၉၉၉ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းမှာ စစ်တပ်တွေထဲမှာ `စည်းရုံးရေး ကော်မတီ´ ဆိုပြီးတော့ အဆင့်ဆင့် ကော်မတီတွေ ဖွဲ့စည်းပါတယ်။ ဥပမာ တပ်မတော် စည်းရုံးရေး ကော်မတီ၊ တိုင်းစည်းရုံးရေး ကော်မတီ၊ တပ်မ စည်းရုံးရေး ကော်မတီ၊ တပ်ရင်းစည်းရုံးရေး ကော်မတီ၊ တပ်ခွဲ စည်းရုံးရေး ကော်မတီ စသဖြင့် အောက်ခြေအဆင့်အထိ အဆင့်ဆင့် ဖွဲ့စည်းပါတယ်။ ယုတ်စွအဆုံး စစ်သားမယားတွေကိုပါ `ရဲမေ စည်းရုံးရေး ကော်မတီ´ ဆိုပြီးတော့ လင်ယောက်ျားရဲ့ ရာထူးအလိုက် အဆင့်ဆင့် ဖွဲ့စည်းကြပါတယ်။ အဲဒီ စည်းရုံးရေး ကော်မတီတွေရဲ့ အဓိက ဦးတည်ချက်ကတော့ `တပ်မတော် မူဝါဒ´ လို့ အမည်ခံထားတဲ့ `လက်ရှိ အာဏာရှင်တွေရဲ့ မူဝါဒ´ ကို တပ်တွင်း အဆင့်ဆင့် ရိုက်သွင်းတာပါ။
ဥပမာအားဖြင့်… `ကျေးဇူးကန်းကြသူများသို့´ ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါး တပုဒ်မှာ ကျနော် တင်ပြခဲ့ဖူးတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်ကို အမည်ရင်းအတိုင်း မခေါ်စေဘဲ `ဒေါ်စုကြည်၊ စုကြည်၊ ဘိုကတော် စုကြည်´ စသဖြင့် ခေါ်ဝေါ်ရမယ်ဆိုတဲ့ တပ်တွင်း ညွှန်ကြားချက်ဟာ တပ်ရင်းတခုရဲ့ စည်းရုံးရေး ကော်မတီ အစည်းအဝေးမှာ ပြောခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။
အလွန်တရာ ဆိုးဝါးလွန်းတဲ့ အချက်ကတော့ စားဝတ်နေရေး ကျပ်တည်းမှု၊ နိုင်ငံရဲ့ ချွတ်ခြုံကျမှုကြောင့် မခံမရပ်နိုင်လို့ လမ်းပေါ်ထွက်ပြီး ဆန္ဒပြကြတဲ့ ပြည်သူတွေကို `အဲဒါ ဗကပတွေ၊ အကြမ်းဖက်သမားတွေ´ လို့ အယုံသွင်း သွေးထိုးပြီး အမုန်းစိတ် သွင်းပေးတာပါ။ နဂိုကတည်းကမှ တပ်တွင်း ခြစားမှုတွေကြောင့် အောက်ခြေအဆင့် စစ်သည်တွေရဲ့ ဘယ်သူ့ကို ပေါက်ကွဲရမှန်း မသိတဲ့ ဒေါသတရားတွေက အဲဒီမှာတင် သူတို့ကို ဘာမှ ပြန်မလုပ်နိုင်တဲ့ သူတို့ရဲ့ အမိအဖ ပြည်သူတွေကို ရက်ရက်စက်စက် ချေမှုန်းခြင်းနဲ့ ဖောက်ခွဲ ပစ်လိုက်ပါတော့တယ်။
ရှေ့တန်းစစ်ဆင်ရေး ထွက်တဲ့အခါ စစ်ဆင်ရေး နယ်မြေမှာ `တွေ့တဲ့လူကို အစိတ်သားက အစ မချန်ထားနဲ့´ ဆိုပြီးတော့ သူပုန်၊ အရပ်သားမရွေး ချေမှုန်းစေသလို အဲဒီ `အစိတ်သားကအစ ချန်မထားတဲ့ စိတ်ဓာတ်´ ကို ဆန္ဒပြပွဲတွေကို ချေမှုန်းတဲ့ နေရာအထိ သယ်ဆောင်လာတဲ့ အခါမှာတော့ ယူကြုံးမရ ဖြစ်စရာ ကောင်းလှတဲ့ သွေးထွက် သံယိုမှုတွေက မြန်မာ့မြေပေါ်မှာ အကျည်းတန်လှစွာနဲ့ ပေါ်ပေါက် လာရပါတော့တယ်။
တကယ်တော့ စစ်တပ်ဆိုတာဟာ တိုင်းပြည်အတွက် မရှိမဖြစ် ဆိုတာကို လူတိုင်းက လက်ခံ ထားကြပြီးသားပါ။ ဒါပေမယ့် မရှိမဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းဟာ တိုင်းပြည်ကို ကာကွယ်ဖို့နဲ့ ပြည်သူလူထု အကျိုးစီးပွားကို ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ လူတစုရဲ့ အကျိုးစီးပွားအတွက် မဟုတ်ပါဘူး။
ဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့ ပစ်ခတ် နှိမ်နင်းမှုတွေမှာ ပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ စစ်သားတိုင်းဟာလည်း အခုလို ရက်စက်မှုကြီးကို အားလုံးက သဘောတူနေကြမယ်လို့ ကျနော် မယုံကြည်ပါဘူး။ လူစိတ်အပြည့်နဲ့ ပြဿနာ တခုကို ငြင်သာ ပျော့ပျောင်းတဲ့ နည်းနဲ့ ပူးပေါင်း အဖြေရှာလိုတဲ့ စစ်ခေါင်းဆောင် အချို့နဲ့ ပြည်သူကို မရက်စက်ချင်တဲ့ အောက်ခြေ စစ်သားတွေ တပ်မတော်ထဲမှာ ရှိနေကြအုံးမှာ အသေအချာပါပဲ။
Posted by ကိုထိုက် at 11:36 8 comments
မိစ္ဆာ ဒိဌိ နအဖ
ဗုဒ္ဓဘာသာ သံဃာတော်တွေကို သတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ နအဖ စစ်အစိုးရကို မိစ္ဆာဒိဌိတွေအဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး ဗုဒ္ဓ အပါအ၀င် ဘာသာရေး ပေါင်းစုံက ဆန့်ကျင် ၀ိုင်းပယ်သွားကြဖို့ ဗကသ ဗမာနိုင်ငံလုံး ဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများ အဖွဲ့ချုပ် (အထက် ဗမာပြည်)က တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
အထက် ဗမာပြည် ဗကသက ပြည်သူလူထုကို ပန်ကြားချက်နဲ့ ကြေညာချက် နှစ်စောင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
`မြန်မာနိုင်ငံလုံး ဆိုင်ရာ ကျောင်းသား သမဂ္ဂအဖွဲ့ချုပ် (အထက်ဗမာပြည် ဗကသ) ကြေညာချက် အမှတ် (၂/၂၀၀၇)´
နအဖ အစိုးရ အနေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ (၈၈) မျိုးဆက် ကျောင်းသားများ၊ ဗကသ ကျောင်းသား လူငယ်များ၊ ရဟန်းသံဃာတော် အရှင်မြတ်များ အပြစ်မဲ့ အရပ်သား ပြည်သူများကို ဖြစ်နိုင်သရွေ့ ခြွင်းချက်မရှိ အမြန်ဆုံး လွှတ်ပေးရန်။
နအဖ အစိုးရ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်သော အန်အယ်ဒီနဲ့ တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်းများ တွေ့ဆုံရေး။ သုံးပွင့်ဆိုင် ဒိုင်ယာလော့ဖြင့် နိုင်ငံ၏ ပြဿနာကို နိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ ဖြေရှင်းရန်။
ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာကို အလဟတ်သ ဖြုန်းတီးနေသော အတုရောင် လူထု ဆန္ဒခံယူပွဲများနဲ့ ပြည်သူလူထုက လုံးဝ အယုံအကြည်မရှိသော နအဖ အစိုးရ၏ road map လမ်းစဉ် (၇) ရပ်ကို ရပ်တန်းက အမြန်ဆုံး ရပ်တန့်ရန်။
ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ သမဂ္ဂ (အထက်ဗမာပြည် ဗကသ)
`အထက်ဗမာပြည် ဗကသ အနေဖြင့် ရဟန်းရှင်လူ ပြည်သူလူထုသို့ နှိုးဆော် ပန်ကြားချက်´
ရဟန်းရှင်လူ ပြည်သူလူထု အနေဖြင့် ၀ါကျွတ်အခါသမယတွင် ပြုလုပ်သည့် စစ်ဖက် အရပ်ဖက် အာဏာပိုင်များနဲ့ ၄င်းတို့၏ နောက်လိုက် ကြံ့ဖွတ်စွမ်းအားရှင် လက်ကိုင်တုတ်လူမိုက်များ၏ အလှူမင်္ဂလာ သာရေး နာရေး ပွဲများကို မတက်ရောက်ကြရန်။
ပြည်သူလူထု၏ အလှူမင်္ဂလာ ပွဲများတွင်လဲ မဖိတ်ကြားကြရန်။
၄င်းအာဏာပိုင်များအား လူထု ဆက်ဆံရေး နယ်ပယ်များအား ပယ်ဖျက်၍ သပိတ်မှောက်ကြရန်၊
ငြိမ်းချမ်းစွာ သပိတ်မှောက်ကြသော ရဟန်းရှင်လူ ပြည်သူလူထု၏ ဆန္ဒပြပွဲကို ဦးဆောင် သတ်ဖြတ်နှိမ်နှင်းသော စက်မှု (၁) ၀န်ကြီး ဦးအောင်သောင်းနဲ့ ၄င်းတပည့် ကြံ့ဖွတ်လူမိုက်တို့၏ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများကို အရောင်းအ၀ယ် မလုပ်ဘဲ သပိတ်မှောက်ကြရန်၊
ပြည်သူလူထု အနေဖြင့် သံဃာတော် အရှင်သူမြတ်တို့၏. ပတ္တနိက္ကုဇ္ဖန ကံဆောင်ပွဲကို ထောက်ခံသော အားဖြင့် ကံဆောင်သံဃာတော် အရှင်သူမြတ်တို့အား ပစ္စည်း လေးပါးအလှူကို ယခင်ကထက် ဆတိုး၍ လှူဒါန်းတော် မူကြရန်၊
ကံမဆောင်ရသော သံဃာတော်များ အနေဖြင့်လဲ အသက်ပေးသွားကြသော အကျဉ်းကျခံနေကြရသော သံဃာ့ အာဇာနည်တို့၏ ဂုဏ်ကျေးဇူးကို ထောက်ထား၍ အာဏာပိုင်တို့၏ သွေးစွန်းသော လက်ဖြင့် လှူဒါန်းသော အလှူများကို ရွံ့ရှာစက်ဆုတ်၍ အလှူမခံဘဲ သပိတ်မှောက်ကြရန်၊
ရဟန်းရှင်လူ ပြည်သူ လူထုသို့ အထက်ဗမာပြည် ဗကသ အဖွဲ့မှ နှိုးဆော် ပန်ကြားအပ်ပါသည်ခင်ဗျား။
Posted by ကိုထိုက် at 08:317comments
သီရိလင်္ကာရောက် မြန်မာ သံဃာတော်များထံမှ ရယူထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဂူအောင်းတဲ့ ခင်ကြီး ပျှော်ရယ်
ယော အတွင်းဝန် ဦးဖိုးလှိ်ုင် တဘောင်
Posted by ကိုထိုက် at 09:447comments
အရေးကြီးပြီ ညီနောင် အပေါင်းတို့
Posted by ကိုထိုက် at 15:177comments
Posted by ကိုထိုက် at 00:36 24 comments
မည်သူယုံကြည်၊ မယုံကြည်၊ ကျနော်ယုံကြည်သည်။
ပထမဦးစွာ ကျနော်သည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ဦးဖြစ်သလို၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ သွန်သင်ဆုံးမမူကြားမှ ပေါက်ဖွားကြီးပြင်းလာခဲ့သူတစ်ဦးလည်း ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆက်ပါရစေ။
ပြီးခဲ့သောရက်ပိုင်းများအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံအတွင့်း ဖြစ်ပျက်ခဲ့မူများကို မြင်တွေ့ကြားသိရပြီးယခု ဆောင်းပါးကို ရေးသားလိုက်ပါသည်၊ ကျနော်သည် ၁၉၉၀ ခုနှစ် န၀တ လက်ထက် မန္တလေးမြို့ ၈၄လမ်းမရှေ့ သံဃာများပစ်ခတ်မူကြောင့် ပေါ်ပေါက်ခဲ့သော ပတ္တနိက္ကုဇ္ဇနကံဆောင်သပိတ်တွင် ပါဝင်ခဲ့ဖူးပါသည်။ ထိုအချိန်ကလည်း သံဃာတော်များသွေးမြေ ကျ ထောင်နဲ့ချီပြီးထောင်သွင်း အကျဉ်းကျခံခဲ့ရဖူးပါသည်။ သို့သော် ထိုအချိန်က Media Technology သည် ယနေ့ခေတ်လောက် မတိုးတက်သေးသဖြင့် ပြည်ပမှ မြင်တွေ့ဖို့ရန်အလွန်ခဲ ယဉ်းလှပါသည်။
ထိုအချိန်က သံဃာတော်များကို ပစ်ခတ်၍ ကျန်ရစ်ခဲ့သော ကျည်ခခဲ့သည့် စစ်စည်းသုတ် သံသပိတ်တစ်လုံးကို မန္တလေးမှ ရန်ကုန် British Embassy ရှိ သတင်းတာဝန်ခံ အဖြစ်တာဝန်ယူထားသူ Daw Nita Yin Yin May (ယခု BBC ၌ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူ)မှ ကူညီပေး၍ အနောက်နိုင်ငံအချို့ မှ စစ်သံမူးများမြင်တွေ့ခဲ့ဖူးပါသည်။ ကျနော်အခုလိုဖော်ပြရသည်မှာ န၀တ တဖြစ်လည်း နအဖသည် မိမိတို့အာဏာတည်မြဲရေး အတွက်ဆိုလျှင် မြတ်စွာဘုရား၏ သားတော်သံဃာတော်များကိုပင် သက်ဖြတ်ဖို့ရန် ၀န်မလေးကြောင်း ၁၉၉၀ ခုနှစ်ကတည်းက ကျနော်မြင်တွေ့ခဲ့ဖူးပါသည်။ နိုင်ငံတော် သံဃာဝန်ဆောင် ဆရာတော်ကြီးများနှင့် ပိဋ္ဋကတ်(၃)ပုံအောင် (၂)ပုံအောင် ဆရာတော်များပင် သင်္ကန်းချွတ်၍ လူဝတ်လဲစေခဲ့ပါသည်။ ကျနော်နှင့် ဆရာတော်ဦးတိလောကဘိဝံသ (အင်းစိန်ရွာမ)ဆိုလျှင် အင်းစိန်ထောင်အဆောင် (၃)အခန်း၌ အတူတူနေခဲ့ဖူးပါသည်။ ယခုလည်း ဆရာတော် ဦးတိလောကဘိဝံသ (တွဲဖက်အကျိုးဆောင်) ကို ကမ္ဘာအေး ဗဟိုသံဃာဝန်ဆောင်များထားရှိသည့် ကမ္ဘာအေးစေတီတွင် အကျယ်ချုပ်ပုံစံမျိုးဖြင့် ထားရှိကြောင်း ဆရာတော်ကြီးနှင့်တွေ့ခဲ့ရသော သူငယ်ချင်းမှပြောပြ၍ သိရပါသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းသံဃာနာယက ဥက္ကဌ(သာသနအလင်းရောင်) ဒေါပုံကျောင်းမှ ဆရာတော်နှင့် နီးစပ်သော သူတစ်ဦးမှ ယနေ့ဖြစ်ပျက်နေမူများကို လျှောက်ထားရာ ဆရာတော်မှ “ငါတို့ကိုယ်တိုင် အစိုးရကို မင်းကျင့်တရားဆယ်ပါးနှဲ့အညီအုပ်ချုပ်ဖို့ပြောတာပဲ” အဲ့ဒါတွေကြတော့ အပြင်ကလူတွေမသိသလို၊ သူတို့ပြောဆိုတာမှန်သမျှကိုလည်း သာသနာရေးဦးစီးဌာနနှင့် အစိုးရ Media များမှ Censorship ပြုလုပ်ပြီး မှ ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါသည်။
သံဃာတော်များက မေတ္တာပို့ပရိတ်ရွတ်ဆိုသည်ကို ကြမ်းတမ်းစွာတုံ့ပြန်ခဲ့သည် သတ္တ၀ါတစ်ကောင်ကဲ့သို့ သဘောထား၍ သံဃာတော်များအား ကြိုးကွင်းဖြင့်ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခဲ့သည်။ ထိုသို့အစိုးရမှပြုမူကျင့်ကြံ ပုံများကို အရေးအခင်းအစပိုင်းကတည်းက ၀န်ချတောင်းပန်ခဲ့လျှင် ယခုကဲ့သို့ အဖြစ်အပျက်ဆိုးမျိုးကို ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့မည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် စစ်အစိုးရသည် မည်သည့် အခါကမျှ မိမိလုပ်ရပ်မှားယွင်းမူများကို ၀န်ချတောင်းပန်ခဲ့ရိုးမရှိ၊ မိမိလုပ်သမျှ အမှန်၊ သူများလုပ်သည်မှန်သမျှ အမှား၊ သူ့အားကန့်ကွက်ခဲ့လျှင်လည်း ရန်ငြိုးဖွဲ့၍ တုံ့ပြန်တတ်သည်။
ဗုဒ္ဓတရားတော်တွင် မေတ္တာပို့၊ ပရိတ်ရွတ်ဆိုသည်မှာ မင်္ဂလာတစ်ပါး မဟုတ်ပါလား။ ပရိတ် ရွတ်ဆိုမူများကိုပင် သည်းခံနိုင်စွမ်း မရှိသော သူများသည်က အခြားမဟုတ်၊ မကောင်းဆိုးရွားများပင်မဟုတ်ပါလော။ မြန်မာတို့သည် ဟိုးယခင်အချိန်များမှစ၍ နှစ်သစ်ကူးအခါသမယ အချိန်များ၌ မင်္ဂလာယူခြင်း၊ ဘေးအန္တရာယ် ကင်းဝေးစေခြင်း အကျိုးငှာ ပရိတ်ရွတ်မေတ္တာပို့သကြသည်ကို မင်္ဂလာ တစ်ပါးအဖြစ်ခံယူပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
ဗိုလ်ချုပ်မူးကြီးသန်းရွှေနှင့် အပေါင်းအပါတို့မှာတော့ ထိုသို့ပရိတ်ရွတ်ဖတ်သရဇ္ဇာယ်မူကိုပင်လျှင် သည်းခံနိုင်စွမ်းမရှိ၊ သံဃာတော်များမှ ပြည်သူများ၌ အကျိုး၊ တိုင်းပြည်သာယာဝပြောစေရေးအကျိုးငှာ မေတ္တာရှေ့ထား၍ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး၊ နီိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား လွတ်မြောက်ရေး၊ ကုန်ဈေးနှုန်းကျဆင်းရေး တို့သာတောင်းဆိုခဲ့ကြပြီး၊ စစ်အုပ်စုအာဏာစွန့်လွှတ်ရေးဆိုသည့် စကားလုံး လုံးဝမပါဝင်ပေ။ ထိုသည်ကိုပင် ရက်စက်စွာပြုရက်ကြပေသည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အများစု ယုံကြည်ထားသည်မှာ မိမိပြုလုပ်ခဲ့သောကောင်းမူကုသိုလ် (ကံ)အလုပ်၊ မကောင်းမူပြုလုပ်ခဲ့သောအလုပ် အကုသိုလ်(ကံ) ကို၊ နောင်ဘ၀မကူးခင် လက်တွေ့ (ပစ္စုပ္ပါန်)ကာလနှင့် နောင်ဘ၀များ၌ ခံစားရမည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။ ထိုသို့ယုံကြည်ထားသည့် အတိုင်းလည်းလက်တွေ့ ဘ၀တွင် အကျိုးသက် ရောက်မူများရှိကြောင်း သက်သေများလည်းရှိသည်။
UNESCO (ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ ယဉ်ကျေးမူအဖွဲ့အစည်း) မှ အကြိမ်ကြိမ်တောင်းပန်နေသည့်ကြားက Afghanistan (အာဖဂန်)တွင် တာလီဘန် (Taliban) အစိုးရမှ ကမ္ဘာရှေးဟောင်း၊ ရုပ်ပွားဆင်းတုတော်ကြီးကို ဒိုင်းနမိုင်းဖြင့်ဖြိုခွဲဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့သည်။ မည်သူမှ မတားဆီးနိုင်ခဲ့သလို၊ ယခင်ဗုဒ္ဓဘာသာတရားပြန်ပွားခဲ့ရာနေရာ တစ်ခုအား ဖျက်ဆီးပြီး၊ မကြာမီမှာပင်၊ ဖျက်ဆီးခဲ့သူများ အတိဒုက္ခရောက်ခံရသည်။ တာလီဘန်အစိုးရ ပြုတ်ကျခဲ့ရသည်။ သွေးထွက်သံယိုမူများဖြင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ယခင်ကဘုန်းမီးနေလတန်ခိုးကြီးခဲ့သော ဦးနေ၀င်းသည်လည်း သူအင်မတန်မှ ချစ်လှစွာ သောသား၊ သမီး၊ မြေး၊ မြစ်များကို သူကိုယ်တိုင် မြေတောက်မြှောက်ပေးခဲ့သည်။ စစ်ခေါင်းဆောင်များက နှစ်ရှည် ထောင်ဒဏ်များဖြင့် ထိန်းသိမ်းပြီး များမကြာမှီမှာပင် ထိုစိတ်နှင့်ပင် အနိစ္စသဘောနှင့် ကိစ္စချောခဲ့ရသည့် အပြင် မထင်မရှားဖြင့်သေဆုံးခဲ့ရရှာသည်။
၈၈ ကာလအတွင်း ကျောင်းသားများကို လူမဆန်စွာပစ်သက်ရန် အမိန့်ပေးခဲ့သော သမ္မတဦးစိန်လွင်သည် လည်း မိမိ၏နောက်ဆုံးခရီးတွင် ကောင်းမွန်စွာ ဘ၀ကူးမကောင်းခဲ့ရရှာပေ။ တပ်မတော်စစ်ဆေးရုံ၏ အထူးကြည့်ရူ့ စောင့်ရှောက်ရသော အခန်းတွင် အခြားသော သက်ြကီးရွယ်အိုများနှင့်ရှိစဉ် အသက်ထွက်ခါနီး အချိန်ထိ ကယောင်ကတမ်းဖြင့် “ဟိုမှာကျောင်းသားတွေ ပစ်ပစ်” ဟု မကြာခဏအော်ရင်း ဘ၀ကူးပြောင်းခဲ့ရရှာသည်။
ဘုရားဟောတရားတော်အရဆိုလျှင် မိမိ၏ နောက်ဆုံး ဘ၀ကူးပြောင်းချိန်သည် အရေးကြီးသည်ဟုဆိုသည်။ ဦးစိန်လွင်တစ်ယောက်မှာတော့ မိမိသေဆုံးခါနီးအချိန်ထိသူတစ်ပါးအပေါ် သက်ဖြတ်စေလိုသော စိတ်ဖြင့်ဘ၀ကူး ပြောင်းသွားခဲ့ရသည့် အဖြစ်ကို ကြည့်လျှင် စာဖတ်ပရိတ်သတ်များပဲ စဉ်းစားကြည့်စေချင်ပါသည်။ ယခုအချိန်အပါယ်ငရဲ၌ မည်မျှခံစားနေရမည်နည်း။ ယုံမှားသံသယရှိစရာမလိုပါ။
(မှတ်ချက်၊ ဦးစိန်လွင်၏ နောက်ဆုံးအခြေအနေကို ထိုအချိန်က ဦးစိန်လွင်နှင့် တခန်းထဲနေခဲ့သူ မိသားစုဝင် များ၏ သတင်းမှတ်တမ်းအားကိုးကားပါသည်။)
၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် မန္တလေးသံဃာတော်များကို သက်ဖြတ်ခဲ့သူများ ပြည်သူလူထုကို နှိပ်စက်ကလူပြုခဲ့သူများ မည်သူကောင်းစားနေခဲ့သနည်း၊၊
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမောင်တစ်ယောက် “တပည့်တော်ကံ ကံစွမ်းအကျိုးကို ယုံကြည်ပါတယ်ဘုရား ” ဟုမိန့်ဆိုခဲ့သည်အတိုင်း၊ ကျန်းမာသန်စွမ်းနေသောဘ၀မှ ရုတ်တရက်ဆိုသလိုစိတ်ရောဂါ ဝေဒနာခံစားနေရပြီး မင်းစည်းစိမ်များကို ခွာရှောင်၍ လူ့ဘ၀မှ နာမည်ပျက်ဖြင့် စွန့်ခွာခဲ့ရသည်။
န၀တအတွင်းရေးမူ(၂) ဗိုလ်ချုပ်တင်ဦး၊ ယခင်အမှတ် ၄ စစ်ဒေသမူးအဖြစ် ရန်ကုန်တိုင်း၌ ပြည်သူလူထုအား နှိပ်စက်မူပြုခဲ့သော ဗိုလ်ချိုပ်လွန်းမောင်သည်လည်းကောင်း၊ မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ လုပ်ကြံသက်ဖြတ်ခြင်း မဟုတ်ဘဲ ၄င်းတို့သံဃာတော်များ ပြည်သူများကိုပြုလုပ်ခဲ့သော ကံက ယခုပင်အကျိုးပေးပြီး ဥပစ္စေဒကကံ (အသေဆိုးနှင့် ရဟတ်ယာဉ်) ပျက်ကျ၍ သေဆုံးခဲ့ရသည်။
“လောက၌ မိမိပြုလုပ်သောကံ(အလုပ်)သည် ယခု (ပစ္စုပ္ပါန်)၌ချက်ချင်း ပင် အကျိုးပေးပါသည်”
စစ်အစိုးရလက်ထက်မည်သူမျှ မယှဉ်နိုင်အောင် တန်ခိုးအာဏာကြီးထွားခဲ့သူ တစ်ဦးအဖြစ် တည်ရှိခဲ့သည့် စစ်ထောက်လှမ်းရေးအကြီးအကဲ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်သည်ပင်လျှင် ယနေ့အချိန်အခါ၌ သူကိုယ်တိုင် အကျယ်ချုပ်ဘ၀ဖြင့် အကျဉ်းစံဘ၀ကို ရောက်ရှိနေခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်က ပြည်သူလူထုများအား ထောင်ချ နှိပ်စက်မူပြုလုပ်ခဲ့သော သူတစ်ယောက် ယခုအချိန်ခါမှာတော့ သူကိုယ်တိုင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ကံရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကို လက်တွေ့ ခံစားနေရပေပြီ မဟုတ်ပါလား။
ဒီပဲယင်းအရေးအခင်းတွင် စီမံကွပ်ကဲ၍ သွေးရှင်းရှင်းထွက် လူသက်ပွဲများကို စီမံကွပ်ကဲခဲ့သူအဖြစ် နာမည်ရ ခဲ့သူ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးဝင်း တစ်ယောက်မှာလည်း စစ်တပ်က၄င်းအား အလိုရှိနေသည်တိုင်အောင် သွေးကင်ဆာဖြင့် မိမိ၏စည်းစိမ်အဆောင်အယောင်၊ အသိုင်းအ၀ိုင်းများကို မခံစားနိုင်တော့ဘဲ သေမင်းခေါ်ရာနောက်သို့ ခပ်မြန်မြန်လိုက်ခဲ့ရရှာသည်။ မည်သူတားနိုင်ခဲ့သလဲ။
“သူတစ်ပါးကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်ကံ ကိုယ့်တစ်ဖန်ပြန်လည်ခံရချေသည်တကား”
အထက်ပါလူပုဂ္ဂိုလ်အချို့ ပြုလုပ်ချက်များကို ကြည့်ရှုပြီးသံဝေဂပွားများသင့်ပါသည်။
ဦးသန်းရွှေသည် ဗုဒ္ဓဘာသာကို Propaganda (၀ါဒဖြန့်ချိရေး) လောကီအရေးအတွက်ကိုး ကွယ်ယုံကြည်သူတစ်ဦး သက်သက်သာဖြစ်ပါသည်။ အများအမြင်ကောင်းစေရန် ဆန်၊ဆီ၊ဆား လူဒါန်းခြင်း၊ အခါကြီးရကကြီးများ၌ သံဃာတော်အား ဆွမ်းကပ်၊ ထီးတင်ခြင်းများပြုလုပ်နေသည့် ရည်ရွယ်ချက်မှာ သူ၏ လောကီရေးရာများ အဆင်ပြေစေရေးနှင့် နိုင်ငံ၏ ၀ါဒဖြန့်ချိရေး၊ အများအမြင်၌ ဘုရားတည် ကျောင်းဆောက် လူအကြည်ညို ပုဂ္ဂိုလ်၊ အများလက်ဦးချီကန်တော့ခံ ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရန်ဖန်တီးအသုံးချနေခြင်းဖြစ်သည်။
ကုလသမဂ္ဂယဉ်ကျေးမူနှင့်သိပ္ပံအဖွဲ့အစည်း (UNESCO) နှင့် နိုင်ငံတကာဗိသုကာ ပညာရှင်များမှ ပြောဆိုနေသည့်ကြားမှ မည်သူ့ပြောဆိုမူမျှ ဂရုမစိုက်ပဲ ဒေါ်လာငွေရရှိရေးကို ရှေ့တန်းတင်ပြီး၊ ပုဂံရှေးဟောင်းဘုရား များအား အသစ်တည်ဆောက်ပြစ်ခြင်း၊ မလိုအပ်ပဲ နန်းမြင့် မျှော်စင်တည်ဆောက်ခြင်းဖြင့် ရှေးဟောင်းဗုဒ္ဓ ယဉ်ကျေးမူ အမွေအနှစ်များကို ဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့သည်။ ထိုမျှတင်မကသေး၊ မိမိနိုင်ငံတွင် ဖျက်ဆီး၍ အားမရသောကြောင့် ဗုဒ္ဓဂါယာ ဗောဓိပင်ခြေရင်းတွင် ကြေးသွန်းဘုရားတစ်ဆူ ၄င်းတို့မိသားစုအမည်ဖြင့် တည်ထားစေခဲ့သည်။
သဘောရိုးသက်သက်ဖြင့် တည်ထားကိုးကွယ်လျှင် သာဓုအကြိမ်ကြိမ် ခေါ်မည်မှာအမှန်ပါ။ (အဆိုး မြင်ဝါဒီတဦးမဟုတ်ပါ။) သို့သော် အခြားနေရာများတွင် သာသနာပြုလုပ်ငန်းများပြု လုပ်ငန်းရှိပါလျှက်
ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်များ ထိမ်းသိမ်းထားရှိရာနေရာတွင် အဆောက်အဦးအသစ်များဖြင့် အများအမြင် ရောထွေးအောင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်၊ မိမိ၏ ဂုဏ်ကျက်သရေ ကျော်ဇောရေးအတွက် လူဒါန်းခြင်းမျိုးဖြစ်သည်ဟု အများကယူဆကြသည်။
သံဃာတော်များနှင့် ဘာသာတရားကို ကိုးကွယ်ရာ၌လည်း မိမိ၏ အာဏာတည်မြဲရေးအတွက် ကိုးကွယ် ခြင်းက နံပါတ်တစ်နေရာတွင် ယူထားသည်။ ဥပမာတစ်ခုပြရလျှင် မန္တလေးတိုင်းမုံရွာမြို့နားတွင် နေထိုင်သီတင်းသုံးခဲ့ သော ဗောဓိတစ်ထောင်ဆရာတော်ကြီးထံ အကြိမ်ကြိမ်သွားရောက်၍ မိမိ၏ မိသားစုရေး၊ ရာထူးအာဏာ တည်တံ့ စေသောအကျိုးငှာ ရည်ရွယ်၍ ဗိုလ်ချုပ်မှူး ကြီးကိုယ်တိုင်တဖုံ၊ တိုင်းမှူး လှမြင့်ဆွေ၊ ယခုနောက်ပိုင်း ဗိုလ်ချုပ်ရဲမြင့်(မန္တလေးတိုင်း) တို့အား လွှတ်၍ ယတြာယူခြင်း၊ ဓာတ်ရိုက်ဓာတ်ဆင်လုပ်ခြင်းများ၊ အကြိမ်ကြိမ်ပြုလုပ် ခဲ့သည်။ မိမိကိုယ်တိုင် တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်နေပြီး မိမိမွေးထားသော သားကြီးမှာ ဆိုးသွမ်းဆုံးမှု မနိုင်ဖြစ်နေသောကြောင့် ဆရာတော်ကြီးအသက်ထင်ရှားရှိနေစဉ် အတွင်းသွားရောက်ပူဆွေး ၍သာသနဘောင်သို့ ကတုံးတုံး၍ ရက်ပိုင်းသာသနဘောင် ၀င်စေခဲ့သည်။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသည် တရားနာယူသည်၊ ဥပုဒ်ဆောင်ဝင်သည်၊ အသက်ဘေးမဲ့ပေးသည်၊ တရားထိုင်သည် စသည့်အလုပ်များနှင့် ပက်သက်၍ သူနှင့် နီးစပ်သော အသိုင်းအ၀ိုင်းကြားတွင် တစ်ခါမျှ မကြားသိဖူးပါ။ သို့သော် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသည် ယတြာချေ၊ ဓာတ်လုံးရေသောက်၊ ဟိုဟာလုပ် ဒီဟာလုပ်ဆိုသော လောကီရေးရာများနှင့်သာ အလုပ်များနေသော ဗုဒ္ဓဘာသာအမည်ခံ တစ်ယောက်ပင်ဖြစ်သည်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသန်းရွှေနှင့် မိသားစုကို အပြင်ပန်းကြည့်လျှင်တော့ စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ချမ်းသာခြင်းဖြင့်ရှိနေကြသည်ဟု ထင်မြင်နိုင်ပါသည်။ အမှန်တကယ်မှာတော့ အတွင်းသန္တာန်စိတ်များအတွင်း၌ ကြောက်ရွံခြင်း၊ စိတ်သောကရောက်ခြင်း၊ တစ်စုံတယောက်မှ လုပ်ကြံမူကို စိုးရိမ်နေခြင်း၊ စသည့်ဒေါသ မောဟများဖြင့် နေ့စဉ်နှင့်အမျှ ခံစားနေရမည်မှာ မုချအမှန်ပဲ ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။
ကျနော်နောက်ဆုံးတင်ပြလိုသည်မှာ သံဃာတော်များက ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သမူကို ရက်ရက်စက်စက် စစ်မြေပြင်၌ ရင်ဆိုင်တွေ့ရသော ရန်သူများကဲ့သို့ ဆက်ဆံ၍ ရုတ်ရင်းကြမ်းတမ်းစွာ ပြုမူဆောင်ရွက် မူများကို ယခုဘ၀မကူးခင်ပင် ၀န်ချတောင်းပန်သင့်ပေသည်။ သို့မဟုတ် ကျနော်အထက်မှာ တင်ပြခဲ့သော ကံ၏အကျိုးပေးမူများသည် မမြင်နိုင်သော မနက်ဖန်ရက်များတွင် မည်သည့်ဘေးဥပဒ်ဆိုးနှင့်ကြုံတွေ့ရမည်ဆိုသော အချက်မှာ သေချာနေပေတော့သည်။ ထို့ကြောင့် ကျနော်ပြောဆိုလိုသည်မှာတောင်းပန်သည် အလျော့ပေးသည်ဆိုသည့်စကားများကို ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနှင် အပေါင်းအပါများက အရှုံးပေးရသည်ဟု ထင်မြင်ပြီး၊ တီကောင်အား ဆားနှင့်တို့ သလို ကြောက်ရွံ့နေကြသည်ဟု ထင်မိပါသည်။ အမှန်တကယ်မှာတော့ လူတိုင်းလူတိုင်းတွင် အပြစ်နှင့်မကင်းနိုင်ကြပါ။ စင်းလုံးချော လူသားရယ်လို့ ဤကမ္ဘာမြေကြီးမှာ မရှိပါ။ မြတ်ဗုဒ္ဓရှင်တော် ဘုရားကိုယ်တော်တိုင် ဒုက္ခရစရိယာတရားကို (၆)နှစ်ကြာ ဥရုဝေလတောမှာ ကျင့်ကြံခဲ့ပြီး၊ ထိုကျင့်စဉ်သည် မှားယွင်းကြောင်းသိရှိဆင်ခြင်မိလျှင် ထိုကျင့်စဉ်ကို စွန့်ခွာ၍ ကျင့်စဉ်အမှန်ကို ရွေးချယ်ရှာဖွေတော်မူခဲ့သည်။ ထိုဥပမာကိုယူကာ မိမိပြုလုပ်ခဲ့သော မှားယွင်းသည့် အပြုအမူ၊ အကျင့်အကြံကို အသိတရားရှိရှိဖြင့် အချန်မဆိုင်းဘဲ ပြုပြင်သွားဖို့လိုအပ်ပါသည်။
စစ်အစိုးရရုပ်မြင်သံကြားများမှ အကြိမ်ကြိမ်အခါခါ ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့သော ဒါရိုက်တာဦးသုခရိုက်ကူး တင်ဆက်ပြသခဲ့သည့် “ရဟန်းစားသောဆွမ်းတနပ်” ဇာတ်လမ်းထဲကလို မြတ်စွာဘုရားရှင် လက်ထက် ရဟန်းသံဃာတော်အား မှားယွင်းရိုက်နှက်သွေးထွက်စေခဲ့သော ကျောက်သွေးဆရာ မဏိဂါရသည် ငရဲပြည်သို့လားခဲ့ရသည် ဟု ဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူခဲ့သည်။
အပါယ်ငရဲသို့ မရောက်စေရန်နှင့် ဆိုးကျိုးအပြစ်များမက သက်သာစေရန်အတွက် အကောင်းဆုံးယတြာကတော့ “ဆရာတော် သံဃာတော်များကို မိမိတို့ပြုလုပ်ခဲ့မိသော ကာယကံမြောက်၊ ၀စီကံ မြောက်၊ မနောကံမြောက် ကျူးလွန်မူများကို ကာယကံရှင်များ ကျေနပ်သည်အထိ တောင်းပန်အပ်ပေသည်။ သို့မဟုတ်ပါက မိမိပြုလုပ်ခဲ့သော အကုသိုလ်ကံသည် မကြာမီအချိန်မှာပင် ပြန်လည်၍ ခံစားရပါမှာ မလွဲဧကန် မုချဖြစ်ပါကြောင်း မည်သူယုံကြည်၊ မယုံကြည် ကျနော်ယုံကြည်မိပါသည်။
မြတ်စွာဘုရားရှင်က အနိစ္စ၊ ဒုက္ခ၊ အနတ္တ (မတည်မြဲခြင်း၊ ဆင်ရဲခြင်း၊ အမြဲမရှိခြင်း) တရားကို ဟောထားခဲ့သည်။ နအဖ စစ်အစိုးရသည် (အတ္တ)တည်မြဲခြင်း၊ တရားကို ရုပ်ပိုင်း၊ စိတ်ပိုင်း၊ လူအား၊ ငွေအားများဖြင့် မရရအောင် ဖော်ကျူးနေသည်။ မည်သည့်တရားကအမှန်ဖြစ်သနည်း၊ စာဖတ်ပရိသတ်များပဲ ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ကြစေလိုပါသည်။
“သတ္တ၀ါများ၏ အကျိုးကျေးဇူးကို ရှေးရှုပြီး အသက်ပေးပျံလွန်တော်မူသွားခဲ့သော ရဟန်း သံဃာတော်များအား ကြည်ညိုရှိခိုးကန်တော့လိုက်ပါသည်၊”
Posted by ကိုထိုက် at 23:09 14 comments
Posted by ကိုထိုက် at 11:457comments
Posted by ကိုထိုက် at 00:05 8 comments
Posted by ကိုထိုက် at 23:58 12 comments
The following list of Burmese regime figures and supporters is subject to financial sanctions as administered by the RBA (refer to RBA Media Release No. 2007-19, 24 October 2007).
Posted by ကိုထိုက် at 20:499comments
Her father is Aung San
Her courage is un-sung
Her life’sasacrifice
For Democracy – the price
To Burma, freedom she will bring
Of her heroism we sing
Her people need her now
Action is her vow
We want her free
Doug Siva (22 Oct 2007)
Posted by ကိုထိုက် at 19:22 15 comments